ဆုလာဘ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်များအားမက်လုံးများလွင့်မျောစေခြင်း၏တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုများ - စွဲလမ်းမှုအတွက်ဂယက်ရိုက်မှု (၂၀၀၉) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn တွင်
မက်လုံးပေး salience မှဆုချ-related တွေကိုများ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုများတွင်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု: စွဲဘို့သက်ရောက်မှု (2009)
2010 ဇန်နဝါရီလ 1 ။ : နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ပုံစံထဲမှာရှိသကဲ့သို့ Published
Neuropharmacology ။ 2009; 56(ပျော့ပျောင်း 1): 139-148 ။
Shelly ခ FLAGEL,* HUDA AKIL,* နှင့် Terry အီး Robinson†
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးမူးယစ်ဆေးဝါးများသူတို့ကိုယ်သူတို့၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်, ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ဓာတ်အပေါ်သာအခြေပြုအတွေးများနှင့်လုပ်ရပ်များအပေါ်ထိန်းချုပ်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောဒီဂရီဆည်းပူး။ စွဲဖြစ်လာသူများသည်တစ်ဦးချင်းစီဝေးမူးယစ်ဆေးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုအနေဖြင့်၎င်းတို့၏အတွေးများနှင့်လုပ်ရပ်များ shift နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်စွဲအတွက်ယခင်ကမူးယစ်ဆေးဝါး-ဆည်းပူးနေနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ကြကြောင်းသောအရပ်တို့ကိုမသို့မဟုတ်အမှုအရာမှထိတွေ့မှု (တွေကို) မကြာခဏသက်တမ်းတိုးမူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေ instigates ။ ကျနော်တို့နှင့်အခြားသူများမူးယစ်ဆက်စပ်တွေကိုသူတို့ Pavlovian (နှိုးဆွ-နှိုးဆွ) သင်ယူမှုမှတဆင့်မက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများဆည်းပူးသောကွောငျ့စိတျအပိုငျးမှာရှိတဲ့မူးယစ်ဆည်းပူးနေအပြုအမူထိန်းသိမ်းရန်နှင့်သွေးထိုးလှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းဆည်းပူးကြောင်း postulated ပါပြီ။ စွဲအပါအဝင် compulsive အမူအကျင့်မမှန်၏အမှု၌, ထိုကဲ့သို့သောတွေကိုရောဂါဗေဒမက်လုံးပေးတန်ဖိုးကို ( "မက်လုံးပေး salience") နှင့်အတူစွပ်စွဲနိုင်ပါသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျနော်တို့မကြာသေးမီကဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းတွေကိုမှမက်လုံးပေး salience attribute ဖို့သဘောထားကိုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုစူးစမ်းဖို့စတင်ပါပြီ။ discrete တွေကိုအစားအစာသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးများ non-ဆက်ပြောပါတယ်ပေးပို့နဲ့ဆက်စပ်ကြသောအခါအချို့တိရိစ္ဆာန်များကဆုလာဘ်ကိုအပ်ပါလိမ့်မည်ရှိရာကနေအကွာအဝေးတွင်တည်ရှိပြီးလျှင်ပင်အလျင်အမြန် cue ချဉ်းကပ်နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လာဆု။ ဒီတိရစ္ဆာန်အတွက်ဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် cue သူ့ဟာသူကမက်လုံးပေး salience နှင့်အတူစွပ်စွဲတာဖြစ်ပါတယ်ယူဆရသောကွောငျ့, ကဦးတည်ချဉ်းကပ်ဆွဲထုတ်ခြင်း, ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာသည်။ ခြွင်းချက်တုံ့ပြန်မှုဤအမျိုးအစားဖွံ့ဖြိုးတိရစ္ဆာန်များ "sign-ခြေရာခံ" ဟုခေါ်ကြသည်။ အခြားတိရစ္ဆာန်, "ရည်မှန်းချက်-ခြေရာခံ" အကျိုးကို-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် cue ချဉ်းကပ်ကြပါဘူး, ဒါပေမယ့် cue တင်ဆက်မှုအပျေါမှာသူတို့ချက်ချင်းစားနပ်ရိက္ခာကိုအပ်ပါလိမ့်မည်ရှိရာတည်နေရာ (ကို "ရည်မှန်းချက်") ကိုသွားပါ။ ရည်မှန်းချက်-tracker တွေအတွက်အကျိုးကို-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် cue ကမက်လုံးပေး salience နှင့်အတူစွပ်စွဲမဟုတ်ပါယူဆရသောကွောငျ့, ဆွဲဆောင်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ကဒီမှာဆုလာဘ်၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုမှမက်လုံးပေး salience attribute ဖို့စိတ်သဘောထားတွင်ဤတစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုစွဲအပါအဝင် compulsive အမူအကျင့်မမှန်မှအားနည်းချက်သို့မဟုတ်ခုခံအပ်နှင်းစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်းပဏာမ data တွေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်။ ဒါဟာ interaction ကပေးသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းလှုံ့ဆော်မှု-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဆုချဖို့မက်လုံးပေးတန်ဖိုးကို attribute မှအတိုင်းအတာဆုံးဖြတ်ရန်ဘယ်လိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ, neurobiological နှင့်မျိုးရိုးဗီဇလေ့လာဖို့ထို့ကြောင့်အရေးကြီးသောဖြစ်လိမ့်မည်။
keywords: စွဲ, autoshaping, ရည်မှန်းချက်-ခြေရာခံခြင်း, မက်လုံးပေး salience, Pavlovian အေးစက်, sign-ခြေရာခံခြင်း
စွဲလမ်း၏ကုသမှုအတွက်အဓိကလက်တွေ့ပြဿနာပင်ရှည်လျားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ပြတ်တောက်ပြီးနောက်ပြန်သွားကြသည်မှစွဲ၏သဘောထားကိုဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့စွဲလမ်းတဲ့ပထမဦးဆုံးရောဂါ၏အများဆုံးကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရလဒ် (relapse တစ် 90% အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်DeJong, 1994), ဤမူးယစ်ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုမှ sensitivity ကိုမှအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်စွဲယခင်ကမူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ရေး (လူများ, နေရာများ, paraphernalia, etc) နဲ့ဆက်စပ်တွေကိုကြုံတွေ့ရသည့်အခါ, ဒီမကြာခဏမူးယစ်ဆေးဝါးအဘို့အပြုမှုအသစ်မူးယစ်ဆေး-ရှာနှင့် / သို့မဟုတ်တဏှာ instigates (ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ရှု Childress et al ။ , 1993) ။ မူးယစ်ဆေး-related တွေကိုကဤသက်ရောက်မှုရှိသည်ထင်နေကြသည်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမဟုတ်ရင်ကြားနေသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုထပ်တလဲလဲခါနီးဆုလာဘ်များခန့်မှန်းအဖြစ်အလားအလာစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ, ထိုကဲ့သို့သောလှုံ့ဆော်မှုကိုသာလုပ်ရပ်အပါအဝင်ဆုလာဘ်၏အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူတွဲ, ဒါပေမယ့် Pavlovian မှတဆင့် (stimulus- ကြသောအခါသောကွောငျ့ဖွစျပါသညျ သူတို့မက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများ-သူတို့ဆည်းပူးနှိုးဆွ) သင်ယူမှု "မက်လုံးပေး salience" (နဲ့အတူ imbued ဖြစ်လာBerridge, 2001; Bindra, 1978; Bolles, 1972; Toates, 1986) ။ မက်လုံးပေး salience များ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုများကသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် Berridge (1996) တစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုနဲ့မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှု "လိုချင်" သို့တစ်ခုမဟုတ်ရင်အတော်လေးကြားနေသိမှုဆိုင်ရာအာရုံသို့မဟုတ်ကိုယ်စားပြုဖြစ်ရပ် (ဥပမာ, cue) ၏အသွင်ကူးပြောင်းမှုအဖြစ်။ ဒါက (မြင်ကွင်းများ, အသံများနှင့်အနံ့) ဆုလာဘ်နှင့်၎င်းတို့၏တွေကိုအကြောင်းကို Pavlovian သင်ယူခြင်းအာရုံခံသတင်းအချက်အလက်မှတဆင့်ဖြစ်ပါသည် ( "ဆွဲဆောင်မှု, တပ်မက်လိုချင်သော, riveting မက်လုံးပေး" အသွင်ပြောင်းနေသည်Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 2003) ။ လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု, ခြွင်းချက်လှုံ့ဆော်မှု "စိတ်ခွန်အားနိုးသံလိုက်" ဖြစ်လာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် (Berridge, 2001) ဆုလာဘ်နှင့်၎င်းတို့၏အချက်ပြမှုများကိုဦးတည် Pavlovian ခြွင်းချက်ချဉ်းကပ်အပြုအမူ၏အမှု၌ (အောက်တွင်မြင်သည်အတိုင်း, သူတို့ကိုဆီသို့ဦးတည်ချဉ်းကပ်နည်းကိုဆွဲထုတ်ခြင်းနှင့် Cardinal et al ။ , 2002a). Tomie (1996) ထိုကဲ့သို့သောတွေကိုထိုကဲ့သို့သောကင်းဆေးလိပ်သောက်ဖို့အသုံးပြုရက်သို့မဟုတ်ပိုက်လောင်ဖို့အသုံးပြုအထူးပြုဖန်ထည်အဖြစ်မူးယစ်ဆေး, ကယ်တင်သော device အတွက် embedded ကြသောအခါ, ဤတွေကိုစွဲလမ်း၏အမူအကျင့်လက္ခဏာ၏အထူးသဖြင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောပုံစံများမြှင့်တင်ရန်နိုင်သည်ကိုစောဒကတက်ခဲ့သည်။
ဒါဟာ (မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏မရှိခြင်းအတွက်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့နှစ်ဦးစလုံး Pavlovian တွေကို၏မက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများ, အရေးယူသို့တစ်ဦးချင်းတုတ်ချွန်၎င်းတို့၏စွမ်းရည်, မူးယစ်ဆက်စပ်တွေကို (နှင့်သောအရပ်တို့ကိုမ) ၏စွမ်းရည်ကိုအဓိကတာဝန်ရှိသည်ထင်နေသည်Everitt နှင့် Robbins, 2000; Schindler et al ။ , 2002) နှင့် abstinence (ဥပမာကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံအပြုအမူသို့မဟုတ် relapse ပြန်လည်ရန်, Kruzich et al ။ , 2001) ။ ကျနော်တို့မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူဆက်နွယ်တွေကို (အထူးသဖြင့်အခင်းအကျင်း) မူးယစ်ရှာကြံအပြုအမူနှင့် relapse သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သည်ကိုတခြားနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါလျှင်သို့သော်ကျနော်တို့လွှတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, မူးယစ်ဆက်စပ်တွေကိုမူးယစ်ဆေး-ယူပြီးအပြုအမူအတွက် "အခါသမယ setting" အဖြစ်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းလှုံ့ဆော်မှုလုပျဆောငျနိုငျ (Skinner, 1938) ။ အခါသမယ-ဆိုသည်အကြောင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့တစ်တုံ့ပြန်မှုထုတ်ယူသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအားဖြည့်ပေမယ့်အကျိုးကိုနှင့် / သို့မဟုတ် Pavlovian ခြွင်းချက်တုံ့ပြန်မှု (များ၏ဖြစ်ပျက်မှုရရှိရန်တုံ့ပြန်ဆာဖြစ်စေ modulate တစ် hierarchical ထုံးစံ၌ပြုမူဆောင်ရွက်မပေးစေခြင်းငှါခြွင်းချက်တွေကိုသို့မဟုတ်အခင်းအကျင်းများမှာဟော်လန်, 1992; Rescorla, 1988; Schmajuk နှင့်ဟော်လန်, 1998) ။ ထိုသို့သောလှုံ့ဆော်မှုမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူအပေါ်တစ်ဦးအစွမ်းထက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ, (Ciccocioppo et al ။ , 2004) တစ်ဦးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းအစီရင်ခံ တခုတည်းသော ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး session ကိုကိုကင်းနှင့်အတူပြီးခဲ့သည့်အတွေ့အကြုံကိုပြီးနောက်တစ်နှစ်အထိကြံ့ခိုင်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အလားတူပင်အခင်းအကျင်းကိုမကြာခဏ (အသစ်တဖန်မူးယစ်ဆေး-ရှာဘို့အခါသမယတင်ထားရန်အစေခံCrombag နှင့် Shaham, 2002) နှင့်ပင်အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျး modulate နိုင်ပါတယ် (Anagnostaras နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1996; Anagnostaras et al ။ , 2002) ။ မူးယစ်ဆေးထုတ်လုပ်သည့် interoceptive တွေကိုလည်းနောက်ထပ်မူးယစ်ဆေး-ရှာဘို့ "ဟုအဆိုပါအခါသမယသတ်မှတ်ထား" နိုငျသောကွောငျ့ဒီအဖြစ်မေးခွန်းအသနားခံပေမယ့်၏သင်တန်း, တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးသူ့ဟာသူ (ကမူးယစ်ဆေးချုပ်) မှထိတွေ့မှု, စိတျအပိုငျးအတွက် relapse / reinstatement ထုတ်လုပ်အတွက်ထိရောက်သောဖြစ်နိုင်သည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များကိုပထမဦးဆုံးသောက်, puff သို့မဟုတ်ဆေးထိုးဖို့ဦးဆောင်အဘယ်အရာဖြစ်သည်။ သောဤ "Higher-ယူမှု" ခြွင်းချက်လှုံ့ဆော်မှုမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်အတိုင်းအတာကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပါ။
စွဲလမ်းထဲကအတော်များများသီအိုရီ (စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးမူးယစ်ဆေး-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်သတင်းရပ်ကွက်များဆီသို့ဦးတည်သောလူသားမြားကိုဆွဲဆောင်အတွက် Pavlovian ခြွင်းချက်လှုံ့ဆျောမှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း, relapse အတွက်ပါပြီdi Chiara, 1998; Everitt နှင့် Robbins, 2005; Robinson နဲ့ Berridge, 1993; Stewart က et al ။ , 1984; Tomie, 1996; Tomie et al ။ , 2007), သေးတိုက်ရိုက်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလေ့လာရန်အလွန်အနည်းငယ်ကြိုးစားမှုရှိခဲ့ပါပြီ။ တဦးတည်းဥပမာထဲမှာကြည့်ရှုပါနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (Kruzich et al ။ , 2001) ဂန္ထဝင်အေးစက်တွေကိုမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူပြန်လည်နိုငျသောကဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်တွေကိုမူးယစ်ဆေး-ရှာခြင်းနှင့် -taking သြဇာလွှမ်းမိုးမည်သို့အများဆုံး Pre-လက်တွေ့လေ့လာမှုများအတွက်တစ်ဦး cue နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဖြန့်ဝေတို့အကြားကနဦးအသင်း cue နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှစ်ဦးစလုံးလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအပေါ်သို့ကဆက်ပြောပါတယ်တင်ပြကြသည်ရှိရာတစ်ဦးဆာပသင်ယူမှု setting ကို, ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေမှာတော့ဥပမာ, တိရစ္ဆာန်တစ် cue (ဥပမာအလင်း) ၏တင်ပြချက်အားဖြင့်လိုက်ပါသွားသောမူးယစ်ဆေးဝါးပြုတ်ရည်ကိုခံယူနိုင်ရန်အတွက်လီဗာစာနယ်ဇင်းမှလေ့ကျင့်သင်ကြားပါလိမ့်မည်။ Cue-သွေးဆောင် reinstatement နောက်ပိုင်းမှာ (ထိုမူးယစ်ဆေးမရနိုင်တော့ပါအခါ) မျိုးသုဉ်းအခြေအနေများအောက်တွင်လေ့လာခဲ့သည်, တုံ့ပြန်ကျွံပြီးနောက်မူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံအပြုအမူပြန်လည်ဖို့မူးယစ်ဆက်စပ် cue (ဥပမာအလင်း) ၏စွမ်းရည်ကိုလေ့လာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် reinstatement ၏စမ်းသပ်မှုကာလအတွင်းယခင်ကမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အလင်းထုတ်လုပ်ကြောင်းအပြုအမူကိုနှိပ်လီဗာ၏လုပ်ဆောင်ချက်, ယခုတွေ့မြင်ပြန်လည်သုံးသပ် (တစ်ဦးတည်းအလငျး၏တင်ဆက်မှုအတွက်ရလဒ်များ Shaham et al ။ , 2003) ။ အဆိုပါ cue ထို့ကြောင့်ကထုတ်လုပ်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအားဖြည့်တစ်ဦးခြွင်းချက် (အလယ်တန်း) စစ်ကူအဖြစ်ပြုမူနိုင်ပါတယ်။ လူသားမြားသညျတှငျ, သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါး၏ဆေးထိုးနဲ့ဆက်စပ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုများသောအားဖြင့်ပစ္စုပ္ပန်များမှာ ကြိုတင် အဆိုပါထိုးသွင်းဖို့မူးယစ်ဆေး-သူတို့ရုတ်တရက်မူးယစ်ဆေးယူပြီး၏အကျိုးဆက်အဖြစ်ပေါ်လာကြပါဘူး။ ထိုမှတပါး, စွဲ, relapse ထုတ်လုပ်ကြောင်းတွေကိုသို့မဟုတ်တဏှာအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့် ရှေ့ကသှား မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးဖို့လုပ်ရပ်တွေကိုသူတို့နောက်သို့မလိုက်ကြဘူး; ဆိုလိုသည်မှာသူတို့ (မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုအရေးယူဖို့တစ်ဦးချင်းစီ goading ထက်ပြီးသားထုတ်လွှတ်ခဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအားဖြည့်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်Stewart က et al ။ , 1984).
မူးယစ်ဆေး-ရှာသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေအမူအကျင့်အပေါ် Pavlovian ခြွင်းချက်တွေကိုသက်ရောက်မှုအပေါ်အချက်အလက်များ၏စာခေါငျးပါးထို့ကြောင့်ရှိပါသည်။ လယ်၌ရှိသောသူအများစုမှာလေ့လာမှုများကြောင့်အလွန်ခက်ခဲသည့်အပြုအမူ vs. လုပ်ရပ်များသွေးထိုးလှုံ့ဆော်ကြောင်း Pavlovian မက်လုံးပေးဆာအားဖြည့် (ပြီးသားဖြစ်ပွားခဲ့သည်မူကြောင်းကိုလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအားဖြည့်) ကထိန်းချုပ်ထားသည်မှအတိုင်းအတာဆုံးဖြတ်ရန်စေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပါဝငျသညျ။ ဆာသင်ယူမှုအခြေခံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neurobiological ဖြစ်စဉ်များမူးယစ်ဆက်စပ်တွေကိုနှင့်အရပ်တို့၌မက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုအပ်နှင်းကြောင်း Pavlovian ဖြစ်စဉ်များထံမှအလွန်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဂုဏ်ထူး (အရေးကြီးပါတယ်Cardinal et al ။ , 2002a; Tomie et al ။ , 2007) ။ ထို့ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုပင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏မရှိခြင်းအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအဘို့မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူထိန်းသိမ်းရန်နိုင်ပြီး, ဘယ်လိုသူတို့ relapse precipitate နိုငျပုံကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားနေအတွက်ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောလှုံ့ဆော်မှုမက်လုံးပေးဆည်းပူးသောအခြေခံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များထွက်ဆန်းစစ်ရန်လိုအပ် salience (Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 2003), နှင့်အလှည့်အတွက်နောက်ခံအာရုံကြောအလွှာ delineate ။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျနော်တို့မကြာသေးမီက (အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ပေးဖို့ Pavlovian တွေကိုနိုင်စွမ်းလေ့လာစူးစမ်းဖို့စတင်ပါပြီFlagel et al ။ , 2008; Flagel et al ။ , 2007; Uslaner et al ။ , 2006), နှင့်ထိုကဲ့သို့သောတွေကိုအပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးပုံကိုအထူးသဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှု။ ဤလုပ်ငန်းကိုပဏာမဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့ကနောက်ဆုံးမှာမူးယစ်ဆေး-related တွေကိုစွဲလမ်းအတွက်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကိုရရှိတော်မူသောအားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neurobiological ယန္တရားများသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ အောက်ပါငါတို့သည်ပထမဦးဆုံးသုတေသီများဆုချ-related ဖို့တွေကိုမက်လုံးပေး salience ၏ကိုတွက်ချက်လေ့လာခဲ့ကြနှင့်မည်သို့ဒီအပြုအမူ၌ထင်ရှား၏, တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများကိုဘယ်လိုအပေါ်သမိုင်းဆိုင်ရာစာပေအချို့ကိုဆွေးနွေးပါ။
ဂန္ Pavlovian အေးစက်အတွက် cue (conditional လှုံ့ဆော်မှု, CS) ၏တင်ပြချက်အကျိုးကို၏တင်ဆက်မှုကို (ခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု, အမေရိကန်) နှင့်၎င်း, CS တဲ့ conditional တုံ့ပြန်မှု (CR) ထုတ်ယူနိုင်ရန်ကြွလာထပ်ခါတလဲလဲစုံတွဲနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Pavlov ရဲ့မူလလေ့လာမှုများ၌သူ၏ခွေးပုံမှန်အားစဲနှင့် CS ဖို့တုန့်ပြန်မကြာခဏတိုင်းတာခဲ့ကြသည်တစ်အစားအစာဆုလာဘ်သုံးပြီး CS အမေရိကန်ကထုတ်လုပ်သည့်ခြွင်းချက်မရှိတုံ့ပြန်မှု (UR) နဲ့ဆင်တူတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ reflex တုံ့ပြန်မှု evoked သောရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ပေးခြင်း, salivation ဖြစ်ခဲ့သည်။ တိရိစ္ဆာန်များကိုသူတို့ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းမှလွတ်မြောက်နှင့်သူတို့၏အမူအကျင့်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်သည့်အခါသို့သော်ကြောင့်ဒီအခြေအနေကိုအတွက် CS အစားအစာ-တောင်းစားအပြုအမူများအပါအဝင်အပြုအမူ၏ရှုပ်ထွေးသောပုံစံများ, evoked ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်အရာကိုသင်ယူခဲ့ရုံရိုးရှင်းတဲ့ reflex တုံ့ပြန်မှုမဟုတျကွောငျးသိသာဖြစ်လာခဲ့သည် (အိပ်ချ် Liddell , အတည်မပြုရသေးသောအတွက်ကိုးကား Timberlake နဲ့ Grant က, 1975) ။ အတော်များများကနောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုများ (ရိုးရှင်းသောတုံ့ပြန်မှုများအပြင်၌, Pavlovian CSS နည်းလမ်းတွေအမျိုးမျိုး၌ထငျရှားဖြစ်နိုင်သောရှုပ်ထွေးစိတ်ခံစားမှုနဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များကျလာသောကြောင့်ပြသကြRescorla, 1988) ။ (သတ္တဝါများကို၎င်းတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရွှေ့ဖို့အခမဲ့အခါထို့ကွောငျ့မကြာခဏ CR ကြောင့်ဆီသို့ဦးတည်ချဉ်းကပ်ခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည့် CS (ထို cue သို့မဟုတ် "နိမိတ်လက္ခဏာ") မှကနဦးတိမ်းညွတ်ပါဝင်ပါသည်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိသည်နှင့်မကြာခဏကဆက်ဆံဘရောင်းနှင့် Jenkins, 1968; Hearst နှင့် Jenkins, 1974) ။ စုပေါင်းအပြုအမူတွေဟာ cue ဆီသို့ဦးတည်ညွှန်ကြားခဲ့ကြသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီ CS-ညွှန်ကြားတုံ့ပြန်မှု, "နိမိတ်လက္ခဏာကိုခြေရာခံခြင်း" ဟုခေါ်ခဲ့ကြသည်, ဒါမှမဟုတ် "နိမိတ်", ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းကြောင်း။ ထူးခြား, နိမိတ်လက္ခဏာကိုခြေရာခံခြင်းမျှအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအကျိုးကိုခံယူဖို့တိရစ္ဆာန်များအဘို့လိုအပ်ပါသည်သော်လည်းဖွံ့ဖြိုး; အကြောင်း, အဘယ်သူမျှမလုပ်ရပ်များအားဖြည့်နေကြသည်။ (ထိုဝေါဟာရကို "autoshaping" မကြာခဏဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောကြောင်းမှတ်ချက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း "autoshaping" တကယ်အဘယ်သူမျှမတုန့်ပြန်အားဖြည့်သို့မဟုတ် "ပုံ" သည် Pavlovian လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထဲမှာတစ်ဦး misnomer ဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်အကြောင်း, Pavlovian ခြွင်းချက်ချဉ်းကပ်အပြုအမူ၏ဤပုံစံကိုထုတ်လုပ်; Hearst နှင့် Jenkins, 1974).
အဆိုပါ CR ၏အတိအကျကိုမြေမျက်နှာသွင်ပြင် autoshaping အတူမျိုးစိတ်ပေါ်မူတည်လျက်, CS နှင့်အမေရိကန်နှစ်ဦးစလုံး၏သဘောသဘာဝ။ ဒါဟာမူလကအကျိုးကိုနှင့် CS ဆီသို့ဦးတည်ညွှန်ကြားသူတွေကိုစားသုံးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်အပြုအမူပုံစံများအကြားတစ်ဦးဒီကဗျာတူမကြာခဏရှိကွောငျးမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ခွေးနှင့်အစားအစာဆုလာဘ်နဲ့သူ့ရဲ့လေ့လာမှုတွေမှာတော့ Pavlov (1932) တိရစ္ဆာန်လျှပ်စစ်မီးခှကျ [CS] ကိုလျက်, သို့မဟုတ်၎င်း၏ပါးစပ်သို့လေယူ, ဒါမှမဟုတ်အသံစားရန်ပေါ်လာနိုင်ပါသည် ... ", ဖော်ပြထား ... သူ၏နှုတ်ခမ်းကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ကတစ်ကိစ္စခဲ့ကြသည်သော်လည်းအဖြစ်သူ၏သွားများနှင့်အတူဝါး၏ဆူညံသံအောင် "အစာအာဟာရကိုသူ့ဟာသူရှိခြင်း (pg ။ 95) ။ အလားတူပင်တစ်လီဗာ၏တင်ဆက်မှုတစ်ဦးကိုချက်ချင်းစားနပ်ရိက္ခာတောင့်များ၏တုံ့ပြန်မှု-လွတ်လပ်သောပေးပို့နေဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်လျှင်, အခြို့သောကြွက်အနီးသို့ချဉ်းကပ်မည်နှင့်မကြာခဏကအစားအစာ (သူ့ဟာသူဖြစ်လျှင်အဖြစ်လီဗာဆုပ်ကိုင်နှင့်ပြေးDavey နှင့် Cleland, 1982) ။ ထိုအခိုရေတင်ဆက်မှု (အမေရိကန်) နဲ့တွဲထားပြီးတဲ့ key ကို-အလင်း (CS) နှင့်ထိတွေ့သည့်အခါသူတို့ကသော့ကို-အလင်းမှာညွှန်ကြား (gullet လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူဖြည့်စွက်) တစ်ဦးအရက်သောက်-တိကျတဲ့မော်တာပုံစံပြ။ အပြုအမူ၏ဤပုံစံအစားအသောက်ဆုလာဘ်နှင့်ချိတ်တွဲအောက်ပါခိုထဲမှာပေါ်ထွက်လာသောတုန့်ပြန် (ထံမှကွဲပြားဖြစ်ပါသည်Jenkins နှင့် Moore က, 1973; ကိုလညျးရှု http://go.owu.edu/~deswartz/introduction.html) ။ ထူးခြားတစ် CS အမျိုးသမီး (အမေရိကန်), အထီးဂျပန်ငုံး (နဲ့အတူ copulate ဖို့အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူတွဲသောအခါCoturnix japonica), အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်, ချဉ်းကပ်နှင့်သက်မဲ့အရာဝတ္ထု CS နှင့်အတူ copulate မှလာကြလိမ့်မည် (Koksal et al ။ , 2004ကိုလည်းတွေ့မြင် ဘန်းနှင့် Domjan, 1996; ဘန်းနှင့် Domjan, 2001).
အဆိုပါ CS ၏တင်ဆက်မှုမကြာခဏဆုလာဘ်သူ့ဟာသူ (ဥပမာသူတွေရဲ့စားသောက်အပြုအမူ) ကရူးနှမ်းအပြုအမူနဲ့တူအောင်နေတဲ့ CR မှဦးဆောင်သောအချက်ကို CS အဆိုပါ US- "နှိုးဆွ-အစားထိုး" (များအတွက်အငှားအဖြစ်ပြုမူသောအယူအဆမှဦးဆောင်Pavlov, 1927; Staddon နှင့် Simmelhag, 1971) ။ ဒီ CS အကျိုးကို၏မက်လုံးပေးဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်ကြာမြင့်သောသီအိုရီနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်သော်လည်းအတိတ်တချို့ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူ (ကြည့်ရှုမည်သည့်စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များ၏မရှိခြင်းအတွက် sensorimotor အေးစက်တစ်ဦးမျှသာရောင်ပြန်ဟပ်မှုကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့ကြ Berridge, 2001) ။ သို့သျောကြှနျုပျတို့ယခုဤသူသူတွေရဲ့စားသောက်တုံ့ပြန်မှုကျလာသောကြောင့် CSS (မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများသုံးအခြေခံဂုဏ်သတ္တိများဆည်းပူးသင်သိရBerridge, 2001; Cardinal et al ။ , 2002a): (1) သူတို့ဥပမာ (Pavlovian ခြွင်းချက်ချဉ်းကပ်ခြင်းဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်သူတို့ကိုဆီသို့ဦးတည်ချဉ်းကပ်ထုတ်ယူသို့မဟုတ် sign-ခြေရာခံအပြုအမူနိုင်စွမ်းရှိသည်, Flagel et al ။ , 2008; Hearst နှင့် Jenkins, 1974; Peterson et al ။ , 1972); အဆိုပါ Pavlovian-to-ဆာလွှဲပြောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများကညွှန်ပြအဖြစ် (2) သူတို့ (ဥပမာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆာပလုပ်ရပ်များဝါဒီများကိုစွမ်းအားနိုငျသညျ, Dickinson et al ။ , 2000; Lovibond, 1983; Wyvell နှင့် Berridge, 2000); နှင့် (3) သူတို့အသစ်အဆာပလုပ်ရပ်များ၏သင်ယူမှုအားဖြည့်နိုင်ပါတယ်; သောကွောငျ့ဖွစျသညျ, သူတို့ကဥပမာ (အဖြစ်ခြွင်းချက်စစ်ကူပြုမူနိုငျသညျ, di Ciano နှင့် Everitt, 2004; ဝီလျံနှင့် Dunn, 1991) ။ ထို့အပြင် CR ၏ပုံစံ CS ၏သဘောသဘာဝကလွှမ်းမိုးကြောင်းသရုပ်ဖော်အများအပြားဥပမာ (ကိုတွေ့မြင်ရှိပါတယ် ဟော်လန်, 1977), ကြောင်းနိမိတ်လက္ခဏာကို-ခြေရာခံခြင်းအပြုအမူအကြံပြုခြင်းရိုးရှင်းတဲ့စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု-အစားထိုးမှုကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါ CS တစ်လီဗာ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကြွက်, ဒါမှမဟုတ်သစ်သားတစ်ဘလောက် (လျှင်ဥပမာအားဖြင့်အစားအစာကိုခန့်မှန်းကြောင်း CS ဖို့ CR ၏ပုံစံသည်အလွန်ခြားနားသည်Timberlake နဲ့ Grant က, 1975) ။ ထို့ကြောင့်အရေးပေါ် CR အမေရိကန်နှင့် CS (၏သဘောသဘာဝအပါအဝင်အချက်များစွာ၏နံပါတ်များ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ဖြစ်ကြောင်းရှုပ်ထွေးစိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များ၏ activation ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်Buzsaki, 1982; Davey et al ။ , 1984; Jenkins နှင့် Moore က, 1973; Moore က, 1973; Timberlake နဲ့လူးကပ်, 1985).
နိမိတ်လက္ခဏာကို-ခြေရာခံခြင်း၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းတွေ့မြင်ပြန်လည်သုံးသပ် (အမေရိကန်အဖြစ်အသုံးပြုသည့်သဘာဝဆုလာဘ်နှင့်အတူကောင်းစွာစရိုက်လက္ခဏာတွေခဲ့ Boakes, 1977; Hearst နှင့် Jenkins, 1974; Tomie et al ။ , 1989) နှင့် reward- ဆက်စပ်တွေကိုဒါ irresistibly ဆွဲဆောင်မှုသူတို့ထင်ရသော maladaptive ပေးသွားနိုင်နှင့်ပွဲတစ်ပွဲ compulsive အပြုအမူ (ထိုဖြစ်လာဘယ်မှာအများအပြားဥပမာရှိပါတယ်Boakes et al ။ , 1978; Breland နှင့် Breland, 1961; Hearst နှင့် Jenkins, 1974; ဝီလျံနှင့်ဝီလျံ, 1969) ။ တစ်ဦးဂန္ဥပမာထဲမှာ, (က "သက်ရှိများ၏မတော်မတရားနှိပ်စက်" ဟုချေါBreland နှင့် Breland, 1961, 1966), raccoon တစ်အစားအစာဆုလာဘ်ရရှိရန်အလို့ငှာတစ်ဦး slot ကမှတဆင့်သစ်သားအကြွေစေ့ငွေသွင်းဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါရက်ကွန်းဝံပိုင်းတွင်မဆိုင်းမတွဒီတာဝန်ဖျော်ဖြေ, ဒါပေမယ့်နောက်ထပ်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူသူတို့တစ်တွေရှင်းလင်းဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြပါလျှင်အဖြစ်အကြွေစေ့-compulsive ဟာ, သူတို့ရဲ့ forepaws-ဝါးနှင့်အတူကကိုင်တွယ်ကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့, ပွတ်တိုက်ခြင်းနှင့်ဆေးကြောမိနစ်အနည်းငယ်ဖြုန်း, ထိုအကြွေစေ့၏သွားကြကုန်အံ့နိုင်ခြင်းသလိုပဲ အကြိမ်ကြိမ် slot ကစအကြွေစေ့ချပြီးထိုအခါမူကား, သူကဖြန့်ချိခြင်းမရှိဘဲထုတ်ပြန်ဆွဲကတညျးအစားအစာ၏စာ။ အဆိုပါရက်ကွန်းဝံကအရှုံးမပေးရန်အလွန်တွန့်ဆုတ်ခဲ့ကြသကဲ့သို့အကြွေစေ့သူ့ဟာသူကြောင့်ပေါ်သို့ကိုင်ပြီးအမှန်တကယ်အစားအစာလက်ခံရရှိနှောင့်နှေးသို့မဟုတ်ပင်တားဆီးသော်လည်း, အကြီးအမက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုရှိသည်ထင်ရှား။ , နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ဥပမာချေါ "အနုတ်လက္ခဏာ automaintenance" မူလကအားဖြင့်ဖော်ပြထားခဲ့သည် Hearst နှင့် Jenkins (1974), အဘယ်သူသည်အခြားအဆုံးမှာတစ်အစားအစာဆုလာဘ်၏နောက်ဆက်တွဲပေးအပ်ခြင်းနှင့်အတူကြာမြင့်စွာ box ရဲ့တဦးတည်းအဆုံးမှာ key ကိုအလင်း၏ illumination တွဲ။ အဘယ်သူမျှမတုန့်ပြန်အစာအာဟာရကိုလက်ခံရရှိရန်မလိုအပ်ပေမဲ့, ခိုဒါလုပ်နေတာအချိန်ကသာကန့်သတ်ငွေပမာဏများအတွက်သေတ္တာ၏အခြားအဆုံးမှာမရရှိနိုင်ခဲ့သောအစားအစာ, ပြန်လည်ရယူခြင်းမှသူတို့ကိုတားဆီးသော်လည်းချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်အကြိမ်ကြိမ်သော့ကိုအလင်း Peck မှစတင်ခဲ့သည်။ ဒီအမူအကျင့်ဟာဘာသာရပ်များမကြာခဏအတော်လေးငတ်မွတ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြားမှဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ တစ်ခုမှာသူတို့အဲဒီလိုမယ်လို့ခိုသည့်ဝေးလံသော CS တုံ့ပြန်ဆေးလိပ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်လျှင်မျှော်လင့်ထား (နှင့်လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအကျိုးကို retrieve နှင့်လောင်) ပေသည်။ တုံ့ပြန်၏ဤပုံ compulsive ပုံစံ (ကအတိတ်အတွေ့အကြုံကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ခြင်းဖြင့်အစပျိုးကြောင်းအတွက်စွဲလမ်းတွင်တွေ့မြင်ကြောင်းဆင်တူသည်နှင့်ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်မှုအတော်လေးလွတ်လပ်သောဖြစ်ဟန်Tomie, 1996) ။ နိမိတ်လက္ခဏာကို-လမ်းကြောင်းစွဲလမ်းအပြုအမူတွေနဲ့အခြားချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပုံမမှန် (နဲ့အတူ Impulse, နောက်ထပ်လင့်များတစ် defining attribute ကဒီအပြုအမူကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုထို့အပြင်မရှိခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာ maladaptive အပြုအမူ) သရုပ်Tomie, 1996; Tomie et al ။ , 1998).
အထက်ဖော်ပြထားတဲ့လေ့လာမှုများပြုလုပ်နိမိတ်လက္ခဏာကို-ခြေရာခံခြင်းပြပြီတခြားသူတွေရဲ့နံပါတ်တွေနဲ့သဘောတူညီချက်၌ရှိကြ၏တုံ့ပြန်မှုများ "မတော်တဆအားဖြည့်" ကြောင့်တော့မဟုတ်ပါဘူးနှင့်ကြောင်းကြောင့်အားဖြည့်ဆုံးရှုံးဖို့ဦးဆောင်လျှင်ပင် (တွေ့မြင်ဆက်ရှိနေသေး Gamzu နှင့်ဝီလျံ, 1971; Killeen, 2003; Lajoie နှင့် Bindra, 1976; Timberlake နဲ့လူးကပ်, 1985) ။ ဤအတွေ့ရှိချက်နေသော်လည်းအချို့သုတေသီများသည်နိမိတ်လက္ခဏာကို-ခြေရာခံခြင်းအပြုအမူအတွက် Pavlovian (နှိုးဆွ-နှိုးဆွ) လုပ်ငန်းစဉ်၏အခန်းကဏ္ဍကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြပြီးယင်းကဲ့သို့အပြုအမူကြောင့်တုန့်ပြန်အားဖြည့် (ဥပမာ, ကိုမြင်စေခြင်းငှါအခိုင်အမာပါပြီ Farwell နှင့် Ayres, 1979; Locurto et al ။ , 1976; Locurto, 1981; Myerson et al ။ , 1979; Sanabria et al ။ , 2006; Wessels, 1974) ။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြွက်ကဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာ-ခြေရာခံ CR ဖွံ့ဖြိုးပြီးယင်းမှာလေ့ကျင့်ရေး autoshaping ပြီးနောက်, Locurto နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (1976) တစ်ခုပျက်ကွက်အချိန်ဇယားဖို့တိရိစ္ဆာန်များလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ တိရစ္ဆာန်တို့သည် CS-လီဗာဆက်သွယ်မေးမြန်းရာလျှင်ဤအချိန်ဇယားတွင်အစားအစာဆုလာဘ်ဆီးအတားခဲ့သည်။ ယခင်လေ့လာမှုများဒီအခြေအနေမှာခိုအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုအားဖြည့် (ဥပမာအားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသောမခံခဲ့ရကြောင်းသက်သေအထောက်အထားအဖြစ်သိမ်းယူခဲ့သောတစ်ဦးအနိမ့်မှုနှုန်းမှာပေမယ့်တစ်ဦး CS-key ကိုအလင်းကိုဆက်သွယ်ဆက်လက်အကြံပြု, ဝီလျံနှင့်ဝီလျံ, 1969) ။ မတူတာကတော့, Locurto et al ။ (1976) ဤအခြေအနေများအောက်တွင်ကြွက်သူတို့အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုအားဖြည့်ကကမကထပြုခဲ့ခဲ့ညွှန်ပြမှယူသော CS-လီဗာ, ဆက်သွယ်ခြင်းရပ်တန့်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးကိုတောင်ဒီအဆုံးစွန်သောလေ့လာမှုအတွက် CS-လီဗာရှိသောကြောင့်ယင်း၏ Pavlovian ခြွင်းချက်စိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများထိန်းသိမ်းထားကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် Locurto နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (1976) ထို့အပြင်ခြွင်းချက်တုံ့ပြန်မှု၏မြေမျက်နှာသွင်ပြင် (ဆိုလိုသည်မှာပျက်ကွက် vs. autoshaping) အားဖြည့်များ၏အချိန်ဇယားပေါ် မူတည်. ကွဲပြားသော။ အစီရင်ခံတင်ပြ မတိုင်မီပျက်ကွက်အချိန်ဇယားကိုစတင်ကျင်းပဖို့ CR (ဆိုလိုသည်မှာ gnawing ကကိုက်) ကအတူလီဗာနှင့်အဆက်အသွယ်ချဉ်းကပ်၏ပါဝင်သည်။ တိရစ္ဆာန် investigatory အပြုအမူချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ပြဆက်လက်အတွက်ပျက်ကွက်အချိန်ဇယားစဉ်အတွင်း (ဆိုလိုသည်မှာ sniffing) ကို CS-လီဗာဆီသို့ဦးတည်ညွှန်ကြားထားပေမယ့်ရိုးရိုးကဆက်သွယ်ကိုယ်ထိလက်ရောက်တော့ဘူး။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ပင်ပျက်ကွက်အခြေအနေများအောက်၌ CS-လီဗာမက်လုံးပေးဂုဏ်သတ္တိများ-The ကြွက်ကသူတို့ရဲ့အာရုံကိုချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ညွှန်ကြားဖို့ဆက်လက်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကိုသူတို့သင်ယူတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့ပဲရှိသည်ဖို့ဆက်လက်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သူတို့ (အစမြင် Pavlovian CR ဖွဲ့စည်းကြောင်းအပြုအမူများ၏ကွင်းဆက်ကိုသာ terminal ကို link ကိုအဆီးအတား Stiers နှင့် Silberberg, 1974) ။ ထို့ကြောင့်ပင်ဤအဒေတာနိမိတ်လက္ခဏာကို-ခြေရာခံ CR (ချဉ်းကပ်မှု) Pavlovian သင်ယူမှုနှင့်မတုန့်ပြန်အားဖြည့်တို့အပေါ်မှာမူတည်ကြောင်း, ထပ်မံတောင်မှတုံ့ပြန်မှုအားဖြည့်များ၏မရှိခြင်းအတွက်အပြုအမူထိန်းသိမ်းရန် Pavlovian တွေကိုနိုင်စွမ်းသရုပျဖျောပါ။ နိဂုံးတွေနဲ့ကိုက်ညီ
Tomie (1996) (Pavlovian နိမိတ်လက္ခဏာကို-ခြေရာခံခြင်းအပြုအမူနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုလက္ခဏာတွေအကြားတူညီဖော်ပြရန်ပထမဦးဆုံးအကြားခဲ့ပါတယ်နှင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုသုတေသီများနောက်ထပ်ဒီကြားဆက်ဆံရေးကိုစူးစမ်းဖို့စတင်ပါပြီFlagel et al ။ , 2008; Flagel et al ။ , 2006; NEWLINE, 2002; Tomie et al ။ , 2007) ။ မူးယစ်ဆက်စပ်တွေကို (ကနိမိတ်လက္ခဏာကို-ခြေရာခံ CR ကိုထောကျပံ့သောအတိုင်းအတာအပေါ်အလွန်နည်းပါးလေ့လာမှုများနေဆဲသို့သော်ရှိပါတယ်Cunningham နှင့် Patel က, 2007; Kearns et al ။ , 2006; Krank et al ။ , 2008; Uslaner et al ။ , 2006) ။ အမှန်စင်စစ်တစ် 2005 အတွက် Everitt နှင့် Robbins ရရှိ. မှတ်ချက်ချ (pg ။ 1482) ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်, "ကယုတ္တိနည်းအ Pavlovian ချဉ်းကပ်စွဲလမ်း၏မက်လုံးပေး salience သီအိုရီအတွက်အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်အဖြစ် maladaptively ... စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးစစ်ကူ၏သတင်းရင်းမြစ်ဆီသို့လူသားမြားသဆွဲဆောင်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းထင်စေခြင်းငှါ။ သို့သော် ... တစ်ဦးကမူးယစ်ဆေးဝါးတစ် CS ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်မှချဉ်းကပ် ... ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေမယ့် ... [က] ... ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများတွင်သရုပ်ပြခဲ့ [မဟုတ်] ထားပြီးအလွယ်တကူသဘာဝကဆုလာဘ်များအတွက်တုံ့ပြန်တိရိစ္ဆာန်များတွင်တွေ့မြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးနှင့်သဘာစစ်ကူနဲ့ဆက်စပ် CSS ၏အမူအကျင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု "ဒီကိစ်စတှငျအခြေခံကျကျကွာခြားကြောင်း ... ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကစိတ်ကူးပိုင်းတွင်ကြွက်များလုပ်ပေးမယ့်အစီရင်ခံစာကထောက်ခံခဲ့သည် မဟုတ် ဃကင်းပေးပို့အတူတွဲချဉ်းကပ် discrete တွေကို (Kearns နှင့် Weiss, 2004) ။ အဲဒါကို "မူးယစ်ဆေးနှင့်သဘာစစ်ကူဤကိစ်စတှငျအခြေခံကျကျကွာခြား" အဲဒီစကားမှန်သည်ဆိုပါကစွဲလမ်း၏သီအိုရီများများစွာလေးနက်တည်းဖြတ်မူလိုအပ်ပေလိမ့်မည်။
သို့သော်ယခု (တိရိစ္ဆာန်များမူးယစ်ဆေးဝါးပို့ဆောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြကြောင်း discrete တွေကိုချဉ်းကပ်ကြဘူးကြောင်းအစီရင်ခံစာများနံပါတ်တှေရှိခဲ့တယျCunningham နှင့် Patel က, 2007; Krank et al ။ , 2008; Uslaner et al ။ , 2006) ။ ဥပမာအားဖြင့်, တစ်ဦးကိုအမေရိကန်အနေနဲ့နှုတ်ကိုလောင်အီသနော / saccharin ပါဝင်သည်ဟု (Krank, 2003; Tomie, 2001; Tomie et al ။ , 2003) သို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေး / saccharin ဖြေရှင်းချက် (Tomie, 2001) နိမိတ်လက္ခဏာကို-ခြေရာခံခြင်းအပြုအမူကိုထောကျပံ့နိုငျသညျ။ ဒီလေ့လာမှုတွေနှင့်အတူတစ်ခုမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲဒီ variable ကိုများအတွက်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားမှုရှိကြ၏ပေမယ့်, ချဉ်းကပ်ထောက်ခံသောအရက်ထက်ချိုမြိန်ဖြေရှင်းချက်သောဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပါတယ်။ ပိုများသောမကြာသေးမီက, Krank နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2008) တည်ပြီးသတ်တယ်အမေရိကန်အဖြစ် unsweetened အီသနောဖြေရှင်းချက်ကို အသုံးပြု. ကြွက်များတွင်နိမိတ်လက္ခဏာကို-ခြေရာခံခြင်းအပြုအမူထုတ်ယူနိုင်ရန်တစ်ဦးအီသနော-တွဲ cue (အလင်း) ၏စွမ်းရည်ကိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အီသနော၏ intraperitoneal ထိုးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောအမြင်အာရုံ cue မှ Pavlovian ခြွင်းချက်ချဉ်းကပ်မကြာသေးမီက (နိမိတ်လက္ခဏာကို-ခြေရာခံခြင်းအပြုအမူကိုထင်ဟပ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည် conditional ရာအရပျ preference ကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသုံးပြီးကြွက်တွေမှာသရုပ်ပြခဲ့ပြီးCunningham နှင့် Patel က, 2007) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်ခုအီသနော-ဆက်စပ် cue လည်း (Pavlovian-ဆာလွှဲပြောင်းသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ပြသထားသည်Corbit နှင့် Janak, 2007).
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာတစ်ခုမူးယစ်ဆေးများ၏ဃအုပ်ချုပ်မှုတစ် discrete cue ဖို့နိမိတ်လက္ခဏာကို-ခြေရာခံကိုထောကျပံ့နိုငျကွောငျးကိုသရုပ်ပြဖို့ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုအားဖြင့်ခဲ့တာ Uslaner et al ။ (2006)။ ဒီစမ်းသပ်မှုတစ်ခု illuminated ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်လီဗာ (CS) ၏တစ်ဦး 8 စက္ကတင်ဆက်မှုအတွက်အတူတွဲခဲ့သည် တုန့်ပြန်-လွတ်လပ်သော ကိုကင်း၏သွေးကြောသွင်းဆေးထိုး (အမေရိကန်) ၏ဖြန့်ဝေ။ ရှစ် CS-အမေရိကန်ဒဿနိကဗေဒ 900 စက္က၏ယုတ်နဲ့ကျပန်းအမျိုးမျိုးကြားရုံးတင်စစ်ဆေးကြားကာလနှင့်အတူတစ်ဦးအချိန်ဇယားအပေါ်တင်ပြခဲ့ကြသည်။ ထပ်ခါတလဲလဲသည့်လီဗာ၏ pair နဲ့ကင်းကြွက်များနှင့်အတူ Pseudorandom လက်ခံရရှိကြောင်းကြွက်သော်လည်းပိုမိုလျှင်မြန်စွာပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောအဆိုပါလီဗာချဉ်းကပ်ဖို့စတင်ခဲ့နှင့် (ဆိုလိုသည်မှာ unpaired) CS-အမေရိကန်တင်ပြချက်များကိုမအမှုကိုပြု၏။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်များကဖော်ပြခဲ့သည်သူတို့အားဆနျ့ကငျြဘ၌ရှိကြ၏ Kearns နှင့် Weiss (2004), ကြှနျုပျတို့ (အသေးစိတ်ကြည့်ရှုဤမတူညီသောရလဒ်များကိုအတိုင်းအတာများကွဲပြားမှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းထင်ကြေး Uslaner et al ။ , 2006). Kearns နှင့် Weiss (2004) CS-အမေရိကန်တင်ပြချက်များပျမ်းမျှတိုင်း 90 စက္ကဖြစ်ပေါ်အတူအတော်လေးတိုတောင်းအချင်းချင်းရုံးတင်စစ်ဆေးကြားကာလကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အစားအစာဆုလာဘ်မတူဘဲ, ကင်း၏ neurobiological နှင့် interoceptive သက်ရောက်မှု 90 စက္ကထက်ပိုရှည်ဘို့ဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့သည်။ ဒါဟာယခင်မူးယစ်ဆေးပြုတ်ရည်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနေတုန်းပဲဒါကြောင့်ခက်ခဲကြွက်ကဤဖြစ်ရပ်များပေါင်းသင်းရန်အဘို့အအောင်, နောက်ဆက်တွဲ CS-အမေရိကန်ဒဿနိကဗေဒအပေါ်သို့ကြုံတွေ့ခံခဲ့ကြသည် သို့ဖြစ်. ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်ပါပဲ, Uslaner နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2006) ပိုမိုတိုတောင်းသောကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကြားကာလနှင့်အတူနိမိတ်လက္ခဏာကို - ခြေရာခံအပြုအမူကိုစောငျ့ရှောကျဖို့ပျက်ကွက်ပြီးနောက်မှသာ 900 စက္က၏ကြာကြာ Inter- ရုံးတင်စစ်ဆေးကြားကာလကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
လွတ်လပ်သော (အတည်မပြုရသေးသော) လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ရွေးချယ်ထားသော - ကြွက်လိုင်းများကိုအသုံးပြုပြီး (ခမည်းတော်အရာ၌ et al ။ , 2006), ငါတို့မကြာသေးမီကတွေ့ရှိခဲ့အစားအစာဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်သောတစ် ဦး CS မှခြေရာခံကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များကိုလည်းကိုကင်းတွဲဖက် CS မှလမ်းကြောင်း - sign- ကြောင်း; သော်လည်းရည်မှန်းချက်ခြေရာခံမကျင့်။ ဤတွေ့ရှိချက်များအရစားနပ်ရိက္ခာဆုများကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည့်အချက်များကြောင့်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ခြင်းတွင်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်များနှင့်လည်းသက်ဆိုင်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော်သတိပြုရန်မှာကိုကင်းသည်အစားအစာနှင့် CS အဖြစ်အသုံးပြုသောအခါပေါ်ထွက်လာသော CR ၏မြေမျက်နှာသွင်ပြင်သည်အတော်လေးကွဲပြားသည်။ ကိုကင်းကိုအမေရိကန်တိရိစ္ဆာန်များအဖြစ်အသုံးပြုသောအခါလီဗာနှင့်အဆက်အသွယ်မရှိသလောက်နည်းပါးသည်။ သို့သော်လီဗာနှင့်သက်ဆိုင်သောရှင်းလင်းသောနိမိတ်လက္ခဏာကိုခြေရာခံသည့်အပြုအမူကိုပြသခြင်းဖြင့်လီဗာ၏အနီးအနားရှိချဉ်းကပ်မှုနှင့်စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။Uslaner et al ။ , 2006), intracranial လျှပ်စစ်ဆွအမေရိကန်အဖြစ်အသုံးပြုသောအခါမြင်ကြ CR နှင့်ဆင်တူ (Peterson, 1975; Peterson et al ။ , 1972; Phillips က et al ။ , 1981; ဝီကီနှင့်မက်ဒေါ်နယ်, 1978).
သင်္ကေတ - ခြေရာခံခြင်း vs. အေးစက်ရာအရပျ preference ကို
Pavlovian ခြွင်းချက်လှုံ့ဆော်မှု၏လှုံ့ဆော်မှုဂုဏ်သတ္တိများကိုလေ့လာရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် autoshaping လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအသုံးပြုသောလေ့လာမှုအနည်းငယ်မျှသာရှိသော်လည်းကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်း - အခြေပြုနေရာရွေးချယ်မှု (CPP) ကို အသုံးပြု၍ လေ့လာမှုများစွာရှိသည်။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်မှုကိုတိကျသောအခြေအနေ (နေရာ) သို့နေရာချထားခြင်း၊ ဆားနှင့်အခြားဆားငန်ခြင်းနှင့်တွဲဖက်ပြီးစမ်းသပ်သည့်နေ့၌တိရိစ္ဆာန်များသည်ထိုနေရာနှစ်ခုလုံးကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးဆက်စပ်နေသောအခြေအနေတွင်အချိန်ပိုသုံးပါကတိရစ္ဆာန်များသည် CPP တစ်ခုပြရန်ပြောကြသည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုကြည့်ပါ Bardo နှင့် Bevins, 2000) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုမက်လုံးများဖြစ်စေရန်လှုံ့ဆော်မှုများရရှိပြီး၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိလာသည်ဟုယူဆရသောကြောင့်အခြေအနေကို ဦး စားပေးသတ်မှတ်ခြင်းကို Pavlovian ၏ခြွင်းချက်ဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုပုံစံအဖြစ်မကြာခဏအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသည်။Carr က et al ။ , 1989) ။ CPP တစ်ခုကိုပင်“ အဆင်မပြေသောပုံစံတစ်ခု” အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။NEWLINE, 1992) ။ သို့ရာတွင်၊ CPP ကို ​​ဦး တည်စေသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်၏သဘောသဘာ ၀ မှာမရေရာမှုရှိသည် Cunningham et al ။ , 2006) ။ CPP တွင်ကန ဦး လေ့လာသင်ယူခြင်းသည် Pavlovian ဖြစ်စဉ်များပါ ၀ င်နိုင်သော်လည်းစမ်းသပ်နေ့တွင်အပြုအမူသည် Pavlovian ၏ခြွင်းချက်ဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ (McAlonan et al ။ , 1993; အဖြူ, 1996; အဖြူရောင် et al ။ , 2005) ။ ဥပမာ, Cunningham et al ။ (2006) မှောင်မိုက်သောကာလ၌ထိတွေ့နိုင်သောလှုံ့ဆော်မှုကိုအသုံးပြုပြီး CPP ကိုရရှိခဲ့ပြီး၊ ပါလိုဗေးနီးယား၏ခြွင်းချက်ဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုကြောင့်တိရိစ္ဆာန်များသည်သက်ဆိုင်သောလှုံ့ဆော်မှုများကိုအကွာအဝေးမှမသိရှိနိုင်သောကြောင့်၎င်းအားဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဟုစောဒကတက်ခဲ့သည်။ သူတို့က CPP သည်ခြွင်းချက်အားဖြည့်မှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် CPP ကိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ရန်မရေရာသည့်အတွက် Pavlovian conditional လှုံ့ဆော်မှုများ၏“ ဆွဲဆောင်မှု” ကိုလေ့လာရန်ပိုမိုသင့်လျော်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည် autoshaping ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤစာတမ်း၏ကျန်အပိုင်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ခွဲခန်းမှလေ့လာမှုများနှင့် Pavlovian ခြွင်းချက်လှုံ့ဆော်မှုများသည်မက်လုံးစိတ်အားထက်သန်မှုဂုဏ်သတ္တိများကိုရရှိသောအတိုင်းအတာနှင့်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်လေ့လာမှုများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လိမ့်မည်။
ဆုလာဘ် -related တွေကိုမှမက်လုံးပေး salience ၏ attribute အတွက်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားခြားနားမှု: နိမိတ်လက္ခဏာ - ခြေရာခံခြင်း vs. ရည်မှန်းချက် - ခြေရာခံ
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း discrete cue (CS) ကိုဆုချီးမြှင့်ခြင်း (US) နှင့်အတူ တွဲဖက်၍ ထပ်ခါတလဲလဲတင်ပြသည့်အခါဤဆက်နွယ်မှု (CRs) အပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောတုံ့ပြန်မှုများပေါ်ထွက်လာနိုင်ပြီး CR ၏မြေမျက်နှာသွင်ပြင်သည်မူတည်သည်။ တိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်များသို့မဟုတ်မျိုးကွဲများအပါအ ၀ င်အချက်များများစွာရှိသည်။Boakes, 1977; Kearns et al ။ , 2006; Kemenes နှင့် Benjamin, 1989; Nilsson et al ။ , 2008; Purdy et al ။ , 1999), CS နှင့် US ၏သဘောသဘာဝ (ဘန်းနှင့် Domjan, 1996; Davey နှင့် Cleland, 1982; Davey et al ။ , 1984; Domjan et al ။ , 1988; ဟော်လန်, 1977; Jenkins နှင့် Moore က, 1973; Peterson et al ။ , 1972; Schwam နှင့် Gamzu, 1975; Timberlake နဲ့ Grant က, 1975; Wasserman, 1973), CS နှင့်အမေရိကန်အကြား Spatial နှင့်ယာယီပေါ်ပေါက် (ဘရောင်း et al ။ , 1993; ကော့စတာနှင့်ဘိုကင်, 2007; ဟော်လန်, 1980a; ဆေးလ်ဗား et al ။ , 1992; Timberlake နဲ့လူးကပ်, 1985), CS သို့မဟုတ်အမေရိကန်နှင့်အတူကြိုတင်အတွေ့အကြုံ (Boughner နှင့် Papini, 2003; Engberg et al ။ , 1972; Gamzu နှင့်ဝီလျံ, 1971) နှင့်တိရိစ္ဆာန်များ၏ပြည်တွင်းရေး drive ကိုပြည်နယ် (Berridge, 2001; Boakes, 1977; Davey နှင့် Cleland, 1982; Toates, 1986; Zamble et al ။ , 1985; Zener, 1937) ။ အတူတူယူ, ဤအချက်များအားလုံးသည်တိရစ္ဆာန်၏မက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်ကိုအထောက်အကူပြုထို့ကြောင့် CS CS မက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများရရှိသောဖို့ဒီဂရီကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည် (Lajoie နှင့် Bindra, 1976).
သို့သော်တူညီသောအခြေအနေများအောက်တွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားသည့်အချိန်၌ပင် CR ၏သဘောသဘာဝကွဲပြားမှုသည်ကြီးမားနိုင်သည်။ ငါတို့သိသည်အတိုင်း Zener (1937) တိရိစ္ဆာန်များအားဂန္ထဝင် Pavlovian အေးဆေးတည်ငြိမ်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားသောအခါတွင်ထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားမှုများကိုစနစ်တကျဖော်ပြရန်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။ Zener (1937) အစားအစာဖြန့်ဝေနှင့်အတူခေါင်းလောင်းမြည်ပေမယ့်အများစုနှင့်မတူဘဲ Pavlov's (1932) Zener ရဲ့လေ့လာမှုမှာပါ ၀ င်ခဲ့တဲ့ခွေးတွေကိုမူမူလစမ်းသပ်မှုများမတားဆီးနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော CRs ၏ရှုပ်ထွေးမှုသာမကကြီးမားသောတစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုများကိုလည်းဖော်ပြသည်။ Zener (1937) လေ့ကျင့်ပြီးနောက်အချို့ခွေးများသည် CS သို့“ ခေါင်းလောင်းကိုတည့်တည့်ကြည့်ခြင်း” ဖြင့်တုန့်ပြန်ခဲ့ကြပြီး၊ အခြားသူများကမူ“ သေးငယ်သော်လည်းတိတိကျကျလှုံ့ဆော်မှုသို့ချဉ်းကပ်နည်းကိုပြသခဲ့သည်။ ထို့နောက်စားရန်အနေအထားတစ်ခုသို့ back up လုပ်ခြင်းဖြင့် Zener က“ ထူးခြားသောဖြစ်ရပ်” (pg ။ 391) အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ အခြားခွေးများသည်တုန်ခါနေပြီးခေါင်းလောင်းနှင့်အစားအစာဘောင်းဘီကြားတွင်လှည့်ပတ်ကြည့်နေသည်။
အစားအစာတစ်ခုနှိုးဆွကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းဖြင့် evoked CRs ၏မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အတွက်တစ် ဦး ချင်းအပြောင်းအလဲ Boakes ကြွက်များတွင်အလားတူတစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုဖော်ပြခဲ့သည်သည့်အခါ 1977 သည်အထိအများကြီးနောက်ထပ်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုမခံမယူခဲ့ပါဘူး ဘိုကင်များ (1977) ချက်ချင်းအစားအစာလုံးလေး၏ non- ဆက်ပြောပါတယ်ပေးပို့အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည့်လီဗာ၏အကျဉ်း illumination ပါဝင်သည်ဟုစံ autoshaping လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူက CS တင်ပြမှုအတွင်းကြွက်အချို့သည်ချဉ်း ကပ်၍ လီဗာကို ဆက်သွယ်၍ CS offset ပြီးနောက်အစားအစာဗန်းသို့သွားပြီးယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ((Hearst နှင့် Jenkins, 1974) ။ သို့သော် CS တင်ပြချက်အရအခြားကြွက်များသည်အစားအစာများပို့ဆောင်မည့်နေရာသို့ချက်ချင်းသွားပြီး CS ကာလအတွင်းဗန်းခတ်ကိုထပ်ခါထပ်ခါလည်ပတ်ကြသည်။ ဘိုကင်များ (1977), သူ့အရင်ကဲ့သို့ (Hearst နှင့် Jenkins, 1974), cue (သို့မဟုတ်ဆိုင်းဘုတ်) မှ CS- evoked ချဉ်းကပ်မှုဟုခေါ်တွင်ဆိုင်းဘုတ်"နှင့်, symmetry ၏မျက်နှာကိုထောက်။ , အစားအစာကိုပေးပို့မည်ဖြစ်ကြောင်းတည်နေရာ CS- evoked ချဉ်းကပ်မှုရည်ညွှန်း"ရည်မှန်းချက်ခြေရာခံခြင်း, "ကျနော်တို့ကဒီမှာဒီဝေါဟာရများကိုဆက်လက်သုံးစွဲပါလိမ့်မယ်။ စိတ် ၀ င်စားစရာမှာနိမိတ်လက္ခဏာ - ခြေရာခံနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ရည်မှန်းချက် - ခြေရာခံနိုင်ခြင်းသည် illuminated lever (CS) ၏တည်ရှိမှုအပေါ် မူတည်၍ အစားအစာ (ယူအက်စ်) ကိုဖယ်ရှားသောအခါသို့မဟုတ် CS နှင့် ပတ်သက်၍ ကျပန်းတင်ပြသည့်အခါလျော့နည်းသွားသည်။Boakes, 1977). ဘိုကင်များ (1977) ထို့အပြင်အားဖြည့်ခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေပြောင်းလဲမှုများသိသိသာသာအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုပေါ်ထွက်လာထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ စမ်းသပ်မှု၏ထက်ဝက်သာတွင်အစားအစာပေးပို့ခြင်းသည်စမ်းသပ်မှုတိုင်းတွင်အစားအစာများကိုပေးပို့ခြင်းထက်စာလျှင်ခြေရာခံသည့် CR ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်ပိုမိုထိရောက်သည်၊ ၎င်းသည်ရည်မှန်းချက်ကိုခြေရာခံခြင်း CR ကိုတိုးမြင့်စေသည်။ ဘာသာရပ်များ၏အစားအစာဆင်းရဲချို့တဲ့မှုအဆင့်ကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်နည်းပါးသော်လည်းတိုင်းတာနိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။Boakes, 1977).
အပြုအမူအားထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှုတွင် Pavlovian ၏ခြွင်းချက်ဖြစ်စဉ်များကိုဖော်ပြခြင်း၏အရေးပါမှုကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်အကြောင်းအရာသည်လေ့လာမှုများနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (ဥပမာ၊ Cardinal et al ။ , 2002a; နေ့နှင့် Carelli, 2007; Tomie, 1996; Tomie et al ။ , 2007) -it ကန ဦး လေ့လာမှုများအပြီးတွင်နိမိတ်လက္ခဏာကိုခြေရာခံခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်ခြေရာခံခြင်း CRs နှင့်နှိုင်းယှဉ်။ လေ့လာမှုအနည်းငယ်သာရှိခဲ့သည်မှာအံ့သြစရာဖြစ်သည် Zener (1937) နှင့် ဘိုကင်များ (1977)။ ၎င်းအတွက်ရှင်းပြချက်တစ်ခုမှာ Pavlovian ၏ခြွင်းချက်ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူကိုလေ့လာမှုအများစုတွင်အသုံးပြုသောအခြေအနေများသည်တစ်ပြိုင်နက်တည်းလက္ခဏာများအားခြေရာခံခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်ကိုခြေရာခံခြင်းကိုခွင့်ပြုခြင်းသို့မဟုတ် CRs နှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုတည်းသာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းကို (ခြွင်းချက်အတွက်) ဖြစ်နိုင်သည်။ ကြည့်ပါ ဘန်းနှင့် Domjan, 1996; Nilsson et al ။ , 2008) ။ သို့သော်ရည်မှန်းချက်ကိုခြေရာခံနိုင်ခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်ကိုခြေရာခံခြင်း CR ကိုမျက်နှာသာပေးသည့်အခြေအနေများကိုလေ့လာမှုအနည်းငယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြွက်, Davey, Cleland နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုအသုံးပြု။ (Cleland နှင့် Davey, 1983; Davey နှင့် Cleland, 1982; Davey et al ။ , 1981) နိမိတ်လက္ခဏာကို - ခြေရာခံခြင်းအစားအစာဆုလာဘ်နှင့်အတူတွဲနေတဲ့ discrete အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုမှဖြစ်ပေါ်, ဒါပေမယ့်မဒေသခံတစ် ဦး အာရုံ CS မှသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ တစ် ဦး အာရုံလှုံ့ဆော်မှုမှမြင်သာထင်သာခြွင်းချက်တုံ့ပြန်မှု CS ဆီသို့ ဦး တည်ညွှန်ကြားအနည်းငယ်သာချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူနှင့်အတူ, ရည်မှန်းချက်ခြေရာခံသည်။ CS နှင့် US အကြားယာယီသို့မဟုတ် Spatial အကွာအဝေးကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသည်လက္ခဏာသက်သေခြေရာခံတုန့်ပြန်မှုကျဆင်းခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်ခြေရာခံတုန့်ပြန်မှုတိုးလာခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရှိရသည်။ဘရောင်း et al ။ , 1993; ကော့စတာနှင့်ဘိုကင်, 2007; ဟော်လန်, 1980a, b; ဆေးလ်ဗား et al ။ , 1992).
ရည်မှန်းချက်ခြေရာခံနေသော CR နှင့်နိမိတ်လက္ခဏာကိုခြေရာခံရန်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဦး တည်သောအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနပြုမှုများပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း CR သို့မဟုတ်အခြား CR ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုအပေါ်အာရုံစိုက်မှုလုံးဝနီးပါးမရှိခဲ့ပါ။ ဤသည်မှာလေ့လာမှုအတွက်အရေးကြီးသောကဏ္ area တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်ပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ဆုလာဘ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည့်အချက်များအားမက်လုံးတန်ဖိုးကို attribute လုပ်ရန် propensity နှင့်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုများကိုအကဲဖြတ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Tomie et al ။ (2000) autoshaping ပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးလီဗာ CR စွမ်းဆောင်ရည် (ဆိုလိုသည်မှာခြေရာခံရန်ရည်မှန်းချက်) တွင်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုကိုတင်ပြခဲ့ပြီးစိတ်ဖိစီးမှု - သွေးဆောင် corticosterone ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် monoamines အဆင့်ဆင့်ဆက်စပ်ဆက်စပ်မှုများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အထူးသ, Tomie (2000) တိုးတက်မှုရှိသောလက္ခဏာများကိုစောင့်ကြည့်သောတုံ့ပြန်မှုကိုပြသသောသူများသည်လည်း post-session corticosterone ၏မြင့်မားသောအဆင့်ကိုရရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် ပုံ4အောက်တွင်) နှင့်နျူကလိယအတွက် dopamine နှင့် DOPAC ၏တစ်သျှူးအဆင့်မြင့် accumbens, အ caudate putamen အတွက် DOPAC / DA လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်နှင့် ventral tegmental inရိယာထဲမှာ 5-HIAA နှင့် 5-HIAA / 5-HT လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့် ) ။ Tomie နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2000) နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကြွက်များတွင်တွေ့ရမည့်အာရုံကြောဓာတုဗေဒပရိုဖိုင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုကိုထိခိုက်စေနိုင်သောလက္ခဏာအချို့ကိုဖော်ပြသည်။ Tomie (1998) ပိုမိုအားကောင်းသည့်လက္ခဏာများကိုခြေရာခံသည့်အပြုအမူများကိုလုပ်ဆောင်သောကြွက်များသည်ပိုမိုကြီးမားသောနှောင့်နှေးနေသောဆုများထက်ချက်ချင်းအကျိုးအမြတ်ငယ်များကိုရွေးချယ်ရန်လေ့ကျင့်ခန်းဖြင့်တိုင်းတာသည်နှင့်အမျှပိုမိုများပြားသောနိမိတ်လက္ခဏာများကိုခြေရာခံသည့်အပြုအမူများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်
ပထမဆုံး autoshaping session မတိုင်မှီနှင့်ပြီးနောက် corticosterone တုံ့ပြန်မှု။ အချက်အလက်များကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းမတိုင်မီ (Pre; or basal level) နှင့်ပထမလေ့ကျင့်ရေးသင်ခန်းစာ (Post) ပြီးနောက်ချက်ချင်း corticosterone (Cort) အဆင့် (ng / ml) ± SEM အဖြစ်ဖော်ပြသည်။ ...
Tomie ၏အစားအစာနှင့်အီသနောနှင့်ဆိုင်သောအချက်များအားအမှတ်အသားပြုခြင်းနှင့်၎င်းအပြုအမူသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်မည်သို့အထောက်အကူပြုနိုင်ကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းသည်ဤအပြုအမူနှင့်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုများကိုစတင်စူးစမ်းလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကန ဦး လေ့လာမှုများကသွေးကြောသွင်းရောဂါနှင့်တွဲဖက်သည့် cue တစ်ခုသို့ခြွင်းချက်ဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုကိုလေ့လာရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအာရုံစိုက်ခဲ့သည် (Uslaner et al ။ , 2006) ။ သို့သော်ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစားအစာကိုဆုလာဘ်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းကိုလေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုလေ့လာမှုများတွင်အစားအစာတောင့်တင်ခြင်းနှင့်လီဗာတင်သည့်အရာနှင့်တွဲစပ်ပြီးနောက်ပေါ်ပေါက်လာသော CR တွင်ကြီးမားသောတစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် (Flagel et al ။ , 2008; Flagel et al ။ , 2007အားဖြင့်ဖော်ပြထားခဲ့သကဲ့သို့) ဘိုကင်များ (1977)။ အတိုချုပ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုများတွင် 8 sec အတွက် illuminated lever (CS) ကိုတင်ပြသည်။ ၎င်းကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပြီးသည်နှင့်ချက်ချင်းငှက်ပျောပါသောအစားအစာတောင့်သည် (US) ကိုအနီးအနားရှိ 2.5 စင်တီမီတာအကွာအဝေးရှိ CS-lever သိုလှောင်ရုံသို့ပို့သည်။ ။ ဆုကိုပေးအပ်ခြင်းသည်တိရစ္ဆာန်၏အပြုအမူနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ (ဆိုလိုသည်မှာတိကျသောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအားမပေးပါ။ ) တစ်ခုတည်းသော session တစ်ခုကျပန်းကြားကာလ 25 စအချိန်ဇယားအပေါ်တင်ပြ 90 CS-US တွဲဖက်မှုပါဝင်သည်နှင့်တ ဦး တည်း session တစ်ခု (≈40မိနစ်) တစ်နေ့လျှင်ကောက်ယူသည်။ ကြွက်များသည်အစားအစာချို့တဲ့ခြင်းမဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့အားလုံးသည်ပို့လွှတ်လိုက်သောအစားအစာလုံးလေးများအားလုံးကိုစားသုံးကြသည်။ ဤအခြေအနေများအရ၊ စီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်သည့် Sprague-Dawley ကြွက်များ၏နမူနာကို အသုံးပြု၍ တိရိစ္ဆာန်များကိုအကြမ်းအားဖြင့်အုပ်စုသုံးစု ခွဲ၍ ပေါ်ထွက်လာသည့်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ တုန့်ပြန်နိုင်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ကြွက်များ၏သုံးပုံတစ်ပုံ (နိမိတ်လက္ခဏာ - trackers) သည် ဦး စားပေးချဉ်းကပ်ရန်နှင့်ဆုလာဘ်များကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော cue (CS-lever; 1A ကိန်းဂဏန်းများ, 2A, 2C နှင့် and3) .3) ။ ဒီနိမိတ်လက္ခဏာ - ခြေရာခံတုန့်ပြန်မှုတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုမှာကြွက်ကလီဗာကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာဖိအားပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည် (ပုံ 2C) ကပုံမှန်အားဖြင့်ကဆုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ကိုက်ဖြတ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ပါဘူးပုံ 1A) ။ လီဗာကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်သောအခါထိုတိရိစ္ဆာန်များသည်အစားအစာလုံးလေးကိုချက်ချင်းသွားယူကြသည်။ ကြွက်များ၏သုံးပုံတစ်ပုံခန့် (ရည်မှန်းချက်ခြေရာခံသူများ) သည်ဆုလာဘ် - ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့် CS သို့ခဲခဲသည်။ပုံ 3), ဒါပေမယ့်အစား, CS-လီဗာ၏တင်ပြချက်အပေါ်သူတို့ကအစားအစာ receptacle သို့အလျင်အမြန်သွားသင်ယူကြသည်နှင့်သူတို့ဆုလာဘ်ဖြန့်ဖြူးစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်သူတို့ထဲသို့အကြိမ်ကြိမ်ထည့်သွင်းဖို့လာ (ကြည့်ပါ) ကိန်းဂဏန်းများ 1B, 2B နှင့် 2D) ။ ကျန်ရှိနေသောကြွက်များ၏သုံးပုံတစ်ပုံ (အလယ်အလတ်အုပ်စု) သည်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောလက္ခဏာများမဖော်ပြခြင်း၊ ကိန်းဂဏန်းများ2နှင့် and3; 3; Flagel et al ။ , 2008; ကိုလညျးရှု Boakes, 1977; Zener, 1937) ။ တိရိစ္ဆာန်အားလုံးသည်သူတို့၏ CR မခွဲခြားဘဲအစားအစာလုံးလေးများနှင့်သူတို့၏အပြုအမူများအားလုံးကို intertrial interval များအတွင်းပြန်လည်ရယူပြီးစားသုံးခြင်းသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်နိမိတ်လက္ခဏာကိုခြေရာခံခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်ခြေရာခံခြင်းနှစ်ခုလုံးသည်လီဗာ (CS) ၏တင်ပြမှုအပေါ်မူတည်သည်။ ထို့အပြင် CS-lever တင်ဆက်မှုသည်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြပါ မဟုတ် အစားအစာဖြန့်ဝေမှုနှင့်တွဲဖက်သော်လည်းကျပန်းဖြစ်ပေါ်သည်။ ဆိုင်းဘုတ်ကိုခြေရာခံခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်ခြေရာခံရန် CR (မထုတ်ဝေသေးသောအချက်အလက်များ) မပေါ်ပေါက်ပါ။
(က) ဆိုင်းဘုတ်ကိုခြေရာခံရာ CR ((B)) ၏ရည်မှန်းချက်ကိုခြေရာခံသည့် CR တွင်ပါဝင်သောကြွက်များ၏ဗီဒီယိုတိတ်ခွေမှကိုယ်စားလှယ်ဘောင်များ။ Sign-tracking CR သည်အစားအစာသိုလှောင်ရာ၏ဘယ်ဘက်ရှိ CS-lever ဆီသို့ ဦး တည်သည်။ ၎င်းသည်လီဗာပေါ်တွင်ကျက်စားခြင်းနှင့်ခြစ်ခြင်းများပါဝင်သည်။ The ...
ဆိုင်းအင် - ခြေရာခံနှင့်ရည်မှန်းချက် - ခြေရာခံအပြုအမူ။ The16 နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများတွင်ပျမ်းမျှအားဖြင့် 'lever presses' အရေအတွက်ကို အခြေခံ၍ ကြွက်များကိုအုပ်စုသုံးစုခွဲသည်။ အနက်ရောင်စက်ဝိုင်းများကအများဆုံးပြုလုပ်သောတိရစ္ဆာန်များ၏သုံးပုံတစ်ပုံကိုကိုယ်စားပြုသည် ...
အစားအစာခွက်ကိုချဉ်းကပ်ရန်လီဗာနှင့်ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကွာခြားခြင်း (ဥပမာလီဗာ - အစားအစာခွက်ခြားနားချက်; ရှု။ ) Boakes, 1977; Flagel et al ။ , 2008) ။ ၌ရှိသကဲ့သို့ ပုံ 2, အနက်ရောင်စက်ဝိုင်းနိမိတ်လက္ခဏာ - tracker (ST; n = 14) ကိုကိုယ်စားပြု, ပွင့်လင်းစက်ဝိုင်းရည်မှန်းချက် - trackers ကိုယ်စားပြုသည် ...
တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုများသည်လေ့ကျင့်မှုပထမနေ့ပြီးနောက်တွင်ပင်သိသာထင်ရှားသော်လည်း၎င်းကိုအလေးပေးရန်အရေးကြီးသည် နှစ်ခုလုံး လက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်ခြေရာခံခြင်းတို့သည် CS-US တွဲဖက်မှုအကြိမ်ကြိမ်ပေါ် မူတည်၍ သင်ကြားသောတုံ့ပြန်မှုများဖြစ်ပြီး CRs နှစ်ခုစလုံးသည်တူညီသောအချက်များမှထွက်ပေါ်စေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာတူညီသောခြွင်းချက်နှိုးဆွခြင်း (လီဗာကိုကြည့်ပါ။ ) ကိန်းဂဏန်းများ2နှင့် and3) .3) ။ ဆိုင်းဘုတ်များနှင့်ဂိုးသွင်းသူနှစ် ဦး စလုံးအတွက်ထပ်ခါတလဲလဲ CS-US တွဲဖက်မှုသည် CS ကာလအတွင်းချဉ်းကပ်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကို cue သို့ဖြစ်စေ၊ကိန်းဂဏန်းများ2နှင့် and3), 3), သူတို့သည် cue သို့မဟုတ်ရည်မှန်းချက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရသောနှင့်အတူသန်စွမ်း (ပုံ 2C နှင့် 2D) နှင့်သူတို့ cue သို့မဟုတ်ရည်မှန်းချက်ချဉ်းကပ်သောနှင့်အတူလျင်မြန်စွာ (ပုံ 2E နှင့် 2F) ။ ထို့အပြင်နိဂုံးချုပ်သည်ခြေရာခံသူများ၏ဆုလာဘ် - ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့်လီဗာနှင့်ချဉ်းကပ်ရန်နှင့် CS ကာလအတွင်းအစားအစာခွက် (ရည်မှန်းချက်) ကိုချဉ်းကပ်ရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုများ၌ပင်တည်ငြိမ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ဝေအစီရင်ခံစာများ (Flagel et al ။ , 2008; Flagel et al ။ , 2007) ကျွန်ုပ်တို့သည်5ရက်လေ့ကျင့်မှုရက်များမှအချက်အလက်များကိုပြသသည် ပုံ3ကျွန်ုပ်တို့သည် 16 ရက်ဆက်တိုက်တိရိစ္ဆာန်များအားလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသောယခင်ကမထုတ်ဝေသေးသောအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပြီးသည်နှင့်တစ်ချိန်ကတီထွင်ခဲ့သောတစ်ချိန်တည်းတွင်အမှတ်အသားခြေရာခံခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်ခြေရာခံခြင်း CR များသည်တည်ငြိမ်နေခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးခြင်းနှင့်အတူအလယ်အလတ်အုပ်စုရှိကြွက်များသည်နိမိတ်လက္ခဏာများကိုခြေရာခံသည့်ခြေရာခံများအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်မတူညီသော်လည်းအဆင့်အတန်းနိမ့်သည့်အုပ်စုတွင်ကြွက်များသည်စတင်ခြေရာခံရန်စတင်လေ့ရှိသည်။ တိရိစ္ဆာန်များအားလုံးအတွက်အစားအစာခွက်ကိုကန ဦး ဦး စားပေးသည် (သို့မဟုတ်ဆိုင်းဘုတ်များတွင်ရှိသည့်လီဗာအတွက်ကန ဦး ဦး စားပေးမှုမရှိခြင်း) သည်တိရိစ္ဆာန်များအားလုံးသည်အစားအစာခွက်မှလုံးလေးများပြန်ယူရန်“ ကြိုတင်လေ့ကျင့်ထား” သောကြောင့်အံ့သြစရာတော့မရှိပါ။ Flagel et al ။ , 2008).
ဤအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ နိမိတ်လက္ခဏာများကိုခြေရာခံသူများနှင့်ရည်မှန်းချက်ခြေရာခံသူများအတွက်ဆု - ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့် cue (CS) သည်သင်ယူမှုကိုအထောက်အကူပြုရန်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်မှာရှင်းနေပါသည်။ Sign-trackers နှင့် goal-trackers နှစ်ခုစလုံးတွင်ထပ်ခါတလဲလဲ CS-US တွဲဖက်မှုက CS ၏တင်ပြချက်အပေါ်တွင် မူတည်၍ သင်ယူသောတုန့်ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ CS သည်ညီမျှသည် ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် နှစ် ဦး စလုံးအတွက်အကျိုးကျေးဇူးနှင့်အုပ်စုနှစ်စုလုံးအတွက်ခြွင်းချက်ဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသည်၊ သို့သော်ကွာခြားသည်မှာ ဦးတည်ချက် အဆိုပါ CR ၏။ ဆိုင်းဘုတ်များသည်ဆုလာဘ် (အစားအစာခွက်) ကိုပေးမည့်နေရာနှင့်ဝေးသည့်နေရာတွင်ရှိသည့်တိုင်ဆုလာဘ်များကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့် cue (လီဗာ) ကိုယ်တိုင်ကိုချဉ်း ကပ်၍ ထိန်းချုပ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် CS-lever ၏ရည်မှန်းချက်ကိုကြည့်ပြီးသည့်အခါရည်မှန်းချက်ခြေရာခံများသည်၎င်းကိုမချဉ်းကပ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းကိုဆုလာဘ်ပေးအပ်ခြင်းအတွက်အချက်ပြမှုတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးဆုလာဘ်ကိုပေးမည့်နေရာ (ဥပမာ၊ စားဖိုခွက်) ကိုချဉ်းကပ်ပါ။ ထို့ကြောင့်တိကျသောကြိုတင်ဟောကြားသည့်“ သတင်းအချက်အလက်” CS အနေနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအားလုံး၏လေ့လာသင်ယူမှုကိုအထောက်အကူပြုသောအချက်သည်“ ဆွဲဆောင်မှု” ဖြစ်လာပြီးအချို့သူများတွင်မူသူ့ဟာသူဆီသို့ချဉ်းကပ်လာသည်။
အခြေခံယန္တရားများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသေးသော်လည်းသီအိုရီအရမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုကို အသုံးပြု၍ ဤတွေ့ရှိချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အသုံးဝင်နိုင်သည်။Berridge, 2001; Bindra, 1978; Bolles, 1972) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းမက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုဂုဏ်သတ္တိများကိုဆည်းပူး, ဒါမှမဟုတ်၏ဝေါဟာရများကိုအသုံးပြု။ CS Berridge (2001), မက်လုံးပေး salience နှင့်အတူစွပ်စွဲလှုံ့ဆော်မှု, ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာ, ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအပြုအမူအားကောင်းလာစေပြီးနှင့်ခြွင်းချက်အားဖြည့်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည် Cardinal et al ။ , 2002a) ။ Sign-trackers များတွင် CS သည်သူတို့ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာသည်။ အရေးကြီးသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် CS-lever ကိုထိရောက်သောခြွင်းချက်အားဖြည့်ခြင်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး၊ အသစ်သောပြန်လည်တုန့်ပြန်မှုကိုလေ့လာခြင်းကိုအားဖြည့်ပေးသည်ဟုအတည်မပြုရသေးသောလေ့လာမှုများစွာတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, နိမိတ်လက္ခဏာ - trackers များအတွက် CS ကိုယ်တိုင်ကအနည်းဆုံးနှစ်ခုမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုနှိုးဆွ၏ defining ဂုဏ်သတ္တိများဆည်းပူးရန်ကြွလာ, ဤတိရိစ္ဆာန်များအတွက် CS-လီဗာမက်လုံးပေး salience နှင့်အတူစွပ်စွဲကြောင်းအကြံပြု။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ရည်မှန်းချက်ခြေရာခံသူများအနေဖြင့် CS ကိုယ်တိုင်ကဆွဲဆောင်မှုရှိပုံမပေါ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့သည်၎င်းကိုမချဉ်းကပ်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အားဖြည့်။ ထို့ကြောင့်ရည်မှန်းချက်ခြေရာခံသူများအတွက် CS သည်ဤတိကျသောဂုဏ်သတ္တိများကိုမက်လုံးများနှိုးဆွပေးသည့်ဤတိရိစ္ဆာန်များတွင် CS ကိုယ်တိုင်ကမက်လုံးများလွန်းခြင်းနှင့်မဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုသည်။
ဒီသီအိုရီရေးဆွဲမှုအခြေအနေတွင်နိမိတ်လက္ခဏာကိုခြေရာခံသူများနှင့်ရည်မှန်းချက်ခြေရာခံသူများအကြားခြားနားချက်များကိုစဉ်းစားရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာသူတို့က per se လှုံ့ဆော်မှုမှမက်လုံးပေး salience attribute သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုကွဲပြားပေမယ့်အတွက်မဖြစ်နိုင်သည် ဘယ်မှာ ကစွပ်စွဲသည်။ ထို့ကြောင့်ရည်မှန်းချက်ခြေရာခံသူများအတွက် CS သည်သူကိုယ်တိုင်နှင့်ဤကိစ္စတွင်အစားအစာခွက်သို့လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသည့်အချက်များကိုညွှန်ကြားသည်မှာရည်မှန်းချက်ခြေရာခံသူများသည်အစားအစာခွက်နှင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းအပေါ်ဆီသို့ ဦး တည်သည့် consummatory ကဲ့သို့သောအပြုအမူများ (Mahler နှင့် Berridge 2008, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်သွယ်ရေး) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ရည်မှန်းချက်ခြေရာခံဘို့ CS CS ဆုလာဘ်၏သိမြင်မျှော်လင့်ထား evok နှင့်၎င်းတို့၏အပြုအမူမက်လုံးပေးဖြစ်စဉ်များအားဖြင့်ထက်ပိုမိုသိမြင်ခြင်းဖြင့်အုပ်ချုပ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည် (Toates, 1998) ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဤအချက်အလက်များကိုအတူတကွကောက်ယူပါကနိမိတ်လက္ခဏာများကိုခြေရာခံသူများအနေဖြင့်ဆုလာဘ် - ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့် cue ကိုယ်တိုင်သည် CS သည်မက်လုံးစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကိုရရှိသည်။ ဤတစ် ဦး ချင်းကွဲပြားခြားနားမှုများ၏နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်တစ်ခုမှာ CS ၏ခန့်မှန်းမှုသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်တန်ဖိုးကို၎င်း၏မက်လုံးစိတ်လှုံ့ဆော်မှုဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ခွဲထုတ်ရန်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသူတို့အကြံပြုသည်။ ဆုလာဘ် - ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွေကို၏ "သတင်းအချက်အလက်" နှင့် "မက်လုံးပေး" ဂုဏ်သတ္တိများသူတို့ယူဆရ dissociable အာရုံကြောစနစ်များကကမကထပြုခဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များဖြစ်ကြောင်းပေးထားသည်။ ဤကွဲပြားခြားနားမှုသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားများကိုရှာဖွေရာ၌အရေးကြီးသောအကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဆုလာဘ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်များသည်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ရန်လာပြီးနောက်ထပ်သုတေသနကိုစောင့်မျှော်နေသည်။
နိမိတ်လက္ခဏာ - ခြေရာခံခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက် - ခြေရာခံအပြုအမူဆက်စပ်မှု
ခြွင်းချက်လှုံ့ဆော်မှုမှမက်လုံးပေး salience attribute ဖို့သဘောထားကိုအတွက်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားခြားနားမှုဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ပါဝင်ပတ်သက် ဦး နှောက်ဒေသများ၏အဖွဲ့အစည်းနှင့်စစ်ဆင်ရေးအတွက်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုနှင့်ယူဆရဆက်စပ်သောနေကြသည်။ အရေးကြီးသောပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည့်အာရုံကြောစနစ်တွင် VTA မှနျူကလိယ accumbens နှင့်ဆက်စပ်သောပတ် ၀ န်းကျင်များသို့ dopaminergic projections များပါဝင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤတိုက်နယ်၏တွေ့ရှိချက်များသို့မဟုတ်ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာအသုံးချမှုများသည် Pavlovian ၏ခြွင်းချက်ဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်တားဆီးခြင်းကိုဖော်ပြသောလေ့လာမှုများစွာရှိသည် (Cardinal et al ။ , 2002b; Dalley et al ။ , 2005; နေ့နှင့် Carelli, 2007; နေ့ et al ။ , 2006; Phillips က et al ။ , 1981) ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကန ဦး လေ့လာမှုများအရ dopaminergic စနစ်များကိုသက်ဝင်စေပြီးစွဲစေနိုင်သော - ကိုကင်းကဲ့သို့သောဆေးဝါးဗေဒဆိုင်ရာအေးဂျင့်အားဆိုင်းဘုတ်များနှင့်ရည်မှန်းချက်ခြေရာခံသူများသည်ကွဲပြားမှုရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကိုကင်းအပေါ်စူးရှသောစိတ်ကိုတုံ့ပြန်မှုနှင့်ကိုကင်း - သွေးဆောင်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောအာရုံခံနိုင်စွမ်းအတွက် (propensity) နှစ်မျိုးလုံးကိုလေ့လာခဲ့သည်။Flagel et al ။ , 2008) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကြွက်များသည် Pavlovian တွင်အစားအစာဆုနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်းခံယူပြီးနောက်သူတို့၏လက္ခဏာများ - နိမိတ်လက္ခဏာများ - ရည်မှန်းချက် - ရည်မှန်းချက် - ခြေရာခံ - ကိုကင်းနှင့်ကုသခဲ့သည်။ ရည်မှန်းချက်ခြေရာခံသူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့သောအခါ (cocosine ၏သက်ရောက်မှုသည်) ကိုကင်း၏သက်ရောက်မှုကိုအတန်အသင့်အနေဖြင့်သိသာစွာခံစားခဲ့ရသည်။ ကိုကင်း၏ထပ်ခါတလဲလဲခေါင်းကိုလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်ရန်စွမ်းရည်ကွဲပြားမှုမရှိပါ။ စူးရှသောကုသမှုကိုအောက်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်, ဆိုင်းဘုတ်များ - trackers ထပ်ခါတလဲလဲကုသမှုအပေါ်သို့ psychomotor sensitization များအတွက်သာ။ ကြီးမြတ် propensity ပြသခဲ့သည် (Flagel et al ။ , 2008) ။ ထို့ကြောင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ကွဲပြားခြားနားမှုကွဲပြားမှုသည်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည့်ကိုကင်း - သွေးဆောင်နိုင်သောပလတ်စတစ်ပုံစံတစ်မျိုး၏ထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ dopamine လုပ်ဆောင်မှုတွင်အတွေ့အကြုံ - မှီခိုသောအပြောင်းအလဲများရှိကွဲပြားခြားနားမှုများသည်ဤတိရိစ္ဆာန်များတွင်စိတ်ကိုသိမ်ငယ်စေခြင်း (propossotor sensitization) အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည်။
ကနျူကလိယ accubens (အထူးသဖြင့်အဓိက) အတွက် dopamine လှုပ်ရှားမှု Pavlovian ခြွင်းချက်ချဉ်းကပ်အပြုအမူ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါကြောင်းကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးသော်လည်း Cardinal နှင့် Everitt, 2004; နေ့နှင့် Carelli, 2007; Everitt နှင့် Robbins, 2005; Tomie et al ။ , 2007), ငါတို့သိ, ပထမ ဦး ဆုံး, ငါတို့သိကျွမ်းခြင်းငှါ, ရည်မှန်းချက် - ခြေရာခံအပြုအမူ vs. နိမိတ်လက္ခဏာ - ခြေရာခံခြင်း၏ neurobiological ဆက်စပ်မှုကိုဆနျးစစျဖို့။ ငါတို့သုံးတယ် On-site ကို dopamine နှင့်ဆက်စပ်သောမျိုးဗီဇများကိုလေ့လာရန်ပေါင်းစပ်ခြင်း (ကြည့်ပါ Flagel et al ။ , 2007) ။ ပထမ ဦး ဆုံး (N40 min) လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းအပြီးတွင် ဦး နှောက်ကိုရရှိသည့်အခါ mRNA ထုတ်ဖော်မှုအဆင့်ကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ dopamine receptor (D1R သို့မဟုတ် D2R) ၏ dopamine Transporter ၏အသုံးအနှုန်းကိုပြောင်းလဲရန်အတွေ့အကြုံပြီးနောက်မကြာမီဖြစ်လိမ့်မည်။ (DAT) သို့မဟုတ် tyrosine hydroxylase (TH) mRNA နှင့်“ Basal” စကားရပ်ကိုတိုင်းတာသည်။ ဒီအခြေအနေမှာနိမိတ်လက္ခဏာ - trackers နျူကလိယအတွက် dopamine D1R mRNA သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်ရှိခဲ့ရည်မှန်းချက် - trackers ဆွေမျိုး accumbens ။ ဤတွေ့ရှိချက်များသည်တွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည် Dalley နဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် (2005)သူက D1R accumbens သည်အစောပိုင်းစုစည်းမှုနှင့်နိမိတ်လက္ခဏာကိုခြေရာခံသည့်အပြုအမူများရယူရန်လိုအပ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ပထမလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းပြီးပြီးချင်း VTA ၌ D2R mRNA သို့မဟုတ် DAT သို့မဟုတ် TH mRNA အဆင့်တို့တွင်အုပ်စုကွဲပြားမှုမရှိပါ။5ရက်လေ့ကျင့်မှုပြီးနောက်ပြင်းထန်သောလက္ခဏာ - ခြေရာခံခြင်းသို့မဟုတ်ရည်မှန်းချက်ကိုခြေရာခံခြင်း CR ပေါ်ပေါက်ပြီးနောက် ဦး နှောက်များကိုသီးခြားတိရစ္ဆာန်အုပ်စုမှရရှိသည်။ ဤရွေ့ကားသင်ယူမှု၏အကျိုးဆက်အဖြစ်ပေါ်ပေါက်သောဗီဇစကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများကိုပိုမိုရောင်ပြန်ဖြစ်နိုင်သည်။ လေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးနောက်လက်မှတ်ထိုးသူများသည် VTA တွင် DAT နှင့် TH mRNA အဆင့်များသိသိသာသာနိမ့်ကျသည်။ ရည်မှန်းချက်ရည်မှန်းချက်များအတွက်ရည်မှန်းချက်ခြေရာခံသူများနှင့် D2R (သို့သော် D1R) mRNA အဆင့်နိမ့်သည်။ နည်းစနစ်ဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို dopamine နှင့် DOPAC အဆင့်များနှင့်တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်ရန်ခက်ခဲသည် Tomie (2000) ခြေရာခံရန်လေ့ရှိသောတိရစ္ဆာန်များတွင်သတင်းပို့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ကနိမိတ်လက္ခဏာကို - ခြေရာခံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုရည်မှန်းချက် - ခြေရာခံ CR ၏ dopaminergic စနစ်များအတွက်ကွဲပြားပြောင်းလဲမှုနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းသိသာသည်။ ဤကွဲပြားခြားနားမှုများ၏သဘောသဘာဝနှင့်အလုပ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအရေးပါမှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်အလုပ်များစွာလိုအပ်သည်မှာသေချာသည်။ အလားအလာဆက်စပ်လေ့လာမှုမှာ Uslaner et al ။ (2007) မကြာသေးမီကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ subthalamic နျူကလိယ၏နျူကလိယသည်အစားအစာနှင့်ကိုကင်းဆုလာဘ်များနှင့်ဆက်နွှယ်မှုရှိသည့်နိမိတ်လက္ခဏာကိုခြေရာခံနိုင်ခြင်းကြောင့်ဤဖွဲ့စည်းပုံကိုအာရုံကြောစနစ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
စိတ်ဖိစီးမှု - တုန့်ပြန်မှု (corticosterone နှင့်အသစ်စက်စက်ကို locomotor တုံ့ပြန်မှု)
နိမိတ်လက္ခဏာ - ခြေရာခံခြင်းအတွေ့အကြုံ၏နောက်ထပ်ဇီဝကမ္မဆက်စပ်မှုပလာစမာ corticosterone မြင့်တက်။ Tomie နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက CS-lever နှင့် US (ဤတွင်အသုံးပြုသောနည်းလမ်းများနှင့်တူသော) အစားအစာနှင့် တွဲဖက်၍ တင်ပြသောကြွက်များသည်အစာမပါသောသို့မဟုတ်ကျပန်း CS-US အုပ်စုရှိသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားသော corticosterone ဟော်မုန်းကိုပြသခဲ့သည် (Tomie et al ။ , 2000; Tomie et al ။ , 2004) ။ ထိုမှတပါး, Tomie (2000) လီဗာ၏ကြိမ်နှုန်း (သို့မဟုတ်နိမိတ်လက္ခဏာ - ခြေရာခံသည့်အပြုအမူ) နှင့် corticosterone တုန့်ပြန်မှုတို့အကြားသိသိသာသာဆက်စပ်မှုရှိသည် (20 ပြီးနောက်၎င်းကိုရရှိခဲ့သော်လည်း)th session တစ်ခု autoshaping) ။ ထို့ကြောင့်အတွက်ဖော်ပြထားတဲ့အုပ်စုများအတွက် ပုံ2ငါတို့သည်လည်းပထမ ဦး ဆုံး autoshaping session တစ်ခုမတိုင်မီနှင့်အပြီးအမြီး - nick သွေးနမူနာများအနေဖြင့်ပလာစမာ corticosterone ၏အတိုင်းအတာကိုရရှိခဲ့သည်။ Corticosterone သည်အုပ်စုအားလုံးအတွက်ပထမဆုံး autoshaping session ပြီးနောက်သိသိသာသာတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ သို့သော်စိတ်ဝင်စားစရာမှာတိရိစ္ဆာန်များတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အဆင့်သို့မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ပုံ 4) ။ ထို့ကြောင့်ဤအချက်အလက်များသည်သင်တန်းတစ်ခုတည်းပြီးနောက်ပင်အုပ်စုများကိုကွဲပြားသောဇီဝကမ္မဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုပေးသည်။ တိရိစ္ဆာန်များမှာပြသ ပုံ2အသစ်သောပတ် ၀ န်းကျင်ကို locomotor တုန့်ပြန်မှုကိုလည်းအစပိုင်းတွင်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်အဆန်းကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲနိမိတ်လက္ခဏာများကိုခြေရာခံသည့်အပြုအမူများ (ဆိုလိုသည်မှာလီဗာ၏ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်နိုင်ခြေ) အကြားအသစ်အဆန်း - သွေးဆောင်သောရွေ့လျားခြင်းအကြားသိသာသောဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ r2 (0.06, P = 0.13) ကဤစရိုက်နှစ်ခုကိုခွဲခြား။ မရကြောင်းအကြံပြုသည် ဘီးလင်း et al ။ , 2008).
ကျွန်ုပ်တို့သည်သာနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရာနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုအချို့ကိုနိမိတ်လက္ခဏာ - ခြေရာခံခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်ကိုခြေရာခံသည့်အပြုအမူများကိုဖော်ထုတ်ခြင်းသာဖြစ်သည်။Flagel et al ။ , 2008; Tomie et al ။ , 2007) ။ ထို့အပြင်သူကအမူအကျင့်, neurobiological သို့မဟုတ်မျိုးရိုးဗီဇအချက်များဖြစ်, ဆုလာဘ် -related တွေကိုတုံ့ပြန်ရန်တစ် ဦး ချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှုများအတွက်တာဝန်ရှိသည်အဘယ်အရာအချက်များမှာလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာလေ့လာနိုင်ရန်ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုသည်ကြွက်များ၏ရွေးချယ်ထားသောရပ်ကြီးများကိုအသုံးပြုပြီး ဆက်လက်၍ (အတည်မပြုရသေးသော) လေ့လာမှုများဖြစ်သည်။ ဤလေ့လာမှုများမှဆိုင်းဘုတ် / ရည်မှန်းချက်ခြေရာခံရိုကိုရွေးချယ်ပြီးသားမွေးနိုင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်မျိုးရိုးလိုက်နိုင်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ သို့သော်၎င်းလက္ခဏာကိုမိခင်၏အပြုအမူ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များနှင့်အခြားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များကလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ထပ်မံလေ့လာရန်လိုအပ်သည်မှာစွဲလမ်းမှုကဲ့သို့သောအပြုအမူဆိုင်ရာမမှန်မှုများဖြစ်ပေါ်လာရန်အတွက်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသောစရိုက်များကိုအခြေခံသည့်မျိုးရိုးဗီဇ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neurobiological ယန္တရားများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်လိုအပ်သည် (ဥပမာ၊ ဘီးလင်း et al ။ , 2008).
၎င်းသည် (Pavlovian သင်ယူမှုမှတစ်ဆင့်) မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်ဆုလာဘ် - ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များကိုဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ၊Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 2003; Robinson နဲ့ Berridge, 1993) -and ထိုကဲ့သို့သောတွေကိုမှမက်လုံးပေး salience ၏အလွန်အကျွံသို့မဟုတ်ရောဂါဗေဒ attribution compulsive အပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်Robinson နဲ့ Berridge, 1993) ။ ဆုလာဘ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်များသည်မတွန်းလှန်နိုင်လောက်အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးအပြုအမူအားအလွန်အကျွံထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဟူသောအယူအဆသည်အသစ်သောအယူအဆမဟုတ်ပါ။ ထိုဖြစ်ရပ်ဆန်းကိုဘီစီဘီစီ 1200 မှစတင်ခဲ့သောကမ္ဘာပေါ်တွင်သက်တမ်းအရင့်ဆုံးစာဖြင့်ရေးသားထားသော Rig Veda မှလောင်းကစားသမားတစ် ဦး ကရှင်းလင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ O'Flaherty, 1981) ။ ကစားသမားသည်သူ၏အန်စာတုံးအကြောင်းပြောဆိုရာတွင်“ သစ်ပင်ကြီး၏တုန်လှုပ်စေသောသစ်တောခွံများ… မူးယစ် ငါ့ကိုသူတို့ထွန်သွားဘုတ်ပေါ်လှိမ့်အဖြစ်ငါ့ကို ... အန်စာတုံးငါ့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း ... Soma သောက်စရာကဲ့သို့ငါထင်ရတယ် နိုးပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်“ …” အညိုရောင်အန်စာတုံးများသည်၎င်းတို့အားဖြိုချလိုက်သောအခါသူတို့၏အသံကိုလွှင့်လိုက်သောအခါငါနှင့်သူတို့ချစ်သူရည်းစားတစ် ဦး ကဲ့သို့အမျိုးသမီးများကဲ့သို့သူတို့နှင့်အတူဆုံရပ်သို့ချက်ချင်းထွက်ပြေးခဲ့သည်။ …“ သူတို့ (အန်စာတုံး) ကိုပျားရည်နှင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ တွန်းလှန်စွမ်းအား လက်ရှိဝေါဟာရများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤအန်စာတုံးများသည်များစွာသောမက်လုံးမက်မောမှုနှင့်ဆက်စပ်သည်ဟုထင်ရသည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် Pavlovian သင်ယူမှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်သောလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စွဲလမ်းစေသောဆေးဝါးများ၏ရင်းမြစ်များသို့လူသားများအားဆွဲဆောင်နည်းဖြင့်ဆွဲဆောင်ရာ၌အခန်းကဏ္ play မှပါဝင်သည်ဟုယူဆရသည်။di Chiara, 1998; Everitt နှင့် Robbins, 2005; Robinson နဲ့ Berridge, 1993; Stewart က et al ။ , 1984; Tomie, 1996; Tomie et al ။ , 2007) ။ ဤနေရာတွင်တင်ပြထားသောသီအိုရီဆိုင်ရာသီအိုရီများနှင့်စမ်းသပ်တွေ့ရှိချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆုလာဘ် - ကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အချက်များအားမက်လုံးများလွန်းခြင်းအားဖော်ပြလိုသောစိတ်သဘောထားတစ်ခုချင်းစီတွင်ကွဲပြားမှုများသည်စွဲခြင်းအပါအဝင်အပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါများကိုအားနည်းခြင်း (သို့) ခုခံခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နိမိတ်လက္ခဏာ - ခြေရာခံခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက် - ခြေရာခံခြင်း phenotype အကြားခြားနားဆုလာဘ် - ကြိုတင်ခန့်မှန်းအချက်များမှမက်လုံးပေးတန်ဖိုးကို attribute ဖို့သဘောထားကိုအတွက်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်အပြုအမူအပေါ်အလွန်ကြီးစွာသောထိန်းချုပ်မှုရရှိရန်သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့နှင့်အတူတစ်နည်းလမ်းများပေးစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်မှာတင်ပြကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အများကြီး TER (R37 DA04294) နှင့် HA (R01 DA012286) မှ HA နှင့် TER (5P01DA021633-02) တို့ပါဝင်သည်သည့်အစီအစဉ်ကိုစီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေကထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ရွေးချယ်ထားသောသားပေါက်တိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူအလုပ်ကိုလည်းရေတပ်သုတေသနရုံး (N00014-02-1-0879) မှထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ရန်ပုံငွေကို SBF အားချီးမြှင့်သောရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများဆိုင်ရာသုတေသနအင်စတီကျု (ကင်းဘရစ်ကျန်းမာရေးမဟာမိတ်) ကထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ စာရေးသူများသည် Dr. Kent Berridge နှင့် Jonathan Morrow တို့သည်အစောပိုင်းလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်သောမှတ်ချက်များအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေ။ အမြင်သဘောထားမှတ်ချက်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်သောအရည်အသွေးကိုမြင့်မားစေသည့်ထင်မြင်ချက်ပေးသောမှတ်ချက်များအတွက်အမည်မသိပြန်လည်သုံးသပ်သူများကိုလည်းအသိအမှတ်ပြုပါသည်။
Anagnostaras SG, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ amphetamine ၏ psychomotor လှုံ့ဆော်သက်ရောက်မှုမှအသိ: ဆက်စပ်မှုသင်ယူမှုအားဖြင့်မော်ဂျူ။ Behav Neurosci ။ 1996; 110: 1397-1414 [PubMed]
Anagnostaras စင်ကာပူဒေါ်လာ, Schallert T က, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် psychomotor ာင်းအုပ်ချုပ် memory ဖြစ်စဉ်များ။ Neuropsychopharmacology ။ 2002; 26: 703-715 ။ [PubMed]
Bardo MT, Bevins RA ။ အေးဆေးတည်ငြိမ်သောနေရာ preference ကို: ကငါတို့မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ preclinical နားလည်မှုကိုအဘယျသို့ add သနည်း Psychopharmacology (Berl) 2000; 153: 31-43 [PubMed]
ဘီးလင်း: D, Apr AC အ, Dalley JW, Robbins TW, Everitt BJ ။ အမြင့် Impulse compulsive ကင်း-ဆည်းပူးနေမှ switch သည်ခန့်မှန်းထားသည်။ သိပ္ပံ။ 2008; 320: 1352-1355 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Berridge KC ။ စားနပ်ရိက္ခာဆုလာဘ်: လိုသောနဲ့ like နှိပ်များ၏ဦးနှောက်ကိုအလွှာဟာ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1996; 20: 1-25 ။ [PubMed]
Berridge KC ။ သင်ယူခြင်းအကျိုးကျေးဇူး - အားဖြည့်ခြင်း၊ မက်လုံးများနှင့်မျှော်လင့်ချက်များ။ In: အယ်ဒီတာ Medin D ။ သင်ယူခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှု၏စိတ်ပညာ။ ပညာရေးဆိုင်ရာသတင်းစာ၊ 2001 ။ စစ။ 223-278 ။
တုန့်ပြန်အားဖြည့်ဖို့သိမှုဆိုင်ရာအာရုံ - လှုံ့ဆျောမှုအခြားရွေးချယ်စရာ: ဘယ်လိုလိုက်လျောညီထွေအပြုအမူထုတ်လုပ် Bindra D. ။ အမူအကျင့်နှင့် ဦး နှောက်သိပ္ပံ။ 1978; 1: 41-91
အပြုသဘောအားဖြည့်နှင့်အတူလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆက်စပ်ဖို့သင်ယူမှုအပေါ် Boakes R. စွမ်းဆောင်ရည်။ ခုနှစ်တွင်: Davis က H ကို, Hurwitz H ကို, အယ်ဒီတာများ။ Operant-Pavlovian ဆက်သွယ်မှု။ Erlbaum; Hillsdale, NJ: 1977 စစ။ 67-97 ။
Boake RA, Poli M, Lockwood MJ, Goodall G. အပြုအမူအားလေ့လာခြင်း - ကြွက်တွင်လက္ခဏာပြအားဖြည့်ခြင်း။ J ကို Exp စအို Behav ။ 1978; 29: 115-134 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bolles RC ။ အားဖြည့်ခြင်း၊ မျှော်မှန်းခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်း။ Psychol ဗျာ 1972; 79: 394-409
Boughner RL, Papini MR ။ ကြွက်များတွင်တွေ့မြင်နိုင်လောက်သောလျှို့ဝှက်တားစီးမှု - ယခုသင်ယင်းကိုမြင်တွေ့နိုင်သည် (ဆိုင်းဘုတ်ကိုခြေရာခံ)၊ 2003; 31: 387-392 [PubMed]
Breland K သည်, Breland အမ်သက်ရှိများ၏အလွဲသုံးစားမှု။ Am Psychol ။ 1961; 16: 681-683
Breland K ကို, Breland အမ်တိရိစ္ဆာန်အပြုအမူ။ Macmillan; နယူးယောက်: 1966
Brown B, Hemmes N, Vaca SCd, Pagano C. တံတားများတွင်နှောင့်နှေးနေစဉ်အတွင်းလက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်ခြေရာခံခြင်းနှင့်ခိုများတွင်ပုံသဏ္apာန်ပြောင်းလဲခြင်းကိုခြေရာကောက်ခြင်း။ တိရိစ္ဆာန်သင်ယူခြင်းနှင့်အပြုအမူ။ 1993; 21: 360-368
ဘရောင်း PL, Jenkins HM ။ ခို၏သော့ -pck ၏အလိုအလျောက်ပုံဖော်ခြင်း။ J ကို Exp စအို Behav ။ 1968; 11: 1-8 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Burns M, Domjan အမ်သင်္ကေတသည်ဂျပန်ငုံးများ (Coturnix japonica) J Exp Psychol Anim Behav လုပ်ငန်းစဉ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွင်ရည်မှန်းချက်ခြေရာခံခြင်းကိုခြေရာခံသည်။ 1996; 22: 297-306 [PubMed]
Spatial ညွှန်ကြားထားအေးစက်တုံ့ပြန်၏ဘန်း M က, Domjan အမ်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်: အခြေအနေတွင်နှင့်ရုံးတင်စစ်ဆေးကြာချိန်၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို Exp Psychol Anim Behav လုပ်ငန်းစဉ်။ 2001; 27: 269-278 [PubMed]
Buzsaki G. “ ဘယ်မှာလဲ” တုံ့ပြန်မှု - orienting response ကိုပုံဖော်ခြင်း။ J ကို Exp စအို Behav ။ 1982; 37: 461-484 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Cardinal RN, Everitt BJ ။ အစာစားချင်စိတ်ကိုလေ့လာသည့်အာရုံကြောနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယန္တရားများ - မူးယစ်ဆေးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်မှု။ Curr ထင်မြင်ချက် Neurobiol ။ 2004; 14: 156-162 [PubMed]
Cardinal RN, ပါကင်ဆန်ဂျေ, ခန်းမ J ကို, Everitt BJ ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှု: အ amygdala, ventral striatum နှင့် prefrontal cortex ၏အခန်းကဏ္။ ။ Neurosci Biobehav ဗျာ 2002a; 26: 321-352 [PubMed]
Cardinal RN, ပါကင်ဆန်ဂျေအေ, Lachenal, G, Halkerston KM, Rudarakanchana N ကို, ခန်းမ J ကို, Morrison CH, Howes SR, Robbins TW, Everitt BJ ။ ကြွက်များတွင်စွမ်းဆောင်ရည် autoshaping အပေါ်နျူကလိယ၏ရွေးချယ် excitotoxic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု core ကို, anterior cingulate cortex နှင့် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိပ် accumbens ။ Behav Neurosci ။ 2002b; 116: 553-567 [PubMed]
Carr G, Fibiger H, Phillips က A. မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်တစ်ခုအတိုင်းအတာအဖြစ်နေရာတွင် preference ကို။ ခုနှစ်တွင်: Liebman J ကို, Cooper က S, အယ်ဒီတာများ။ ဆုလာဘ်၏ Neuropharmacological အခြေခံ။ အောက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်၊ 1989 ။ စစ။ 264-319 ။
Childress AR, Ehrman R, Rohsenow D, Robbins SJ, O'Brien CP ။ မူးယစ်ဆေးမှီခိုအတွက်ဂန္ထဝင်အေးစက်အချက်များ။ ခုနှစ်တွင်: Lowinson J ကို, Millman က RP, အယ်ဒီတာများ။ ကျယ်ပြန့်သောပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုဆိုင်ရာပြဌာန်းစာအုပ်။ Williams နှင့် Wilkins; Baltimore: 1993 စစ။ 56-69 ။
Ciccocioppo R၊ Martin-Fardon R, Weiss F. Stimuli သည်ကိုကင်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်နေပြီးကြာရှည်စွာရှာဖွေသည့်ကိုကင်းကိုရှာဖွေသည်။ နတ်နေရာသစ်။ 2004; 7: 495-496 [PubMed]
Cleland GG, Davey GC ။ ကြွက်များတွင် Autoshaping: ဒေသခံအစားအစာများအတွက်ဒေသခံအမြင်အာရုံနှင့်အာရုံအချက်ပြများ၏သက်ရောက်မှု။ J ကို Exp စအို Behav ။ 1983; 40: 47-56 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Corbit LH, Janak PH ။ အီသနောနှင့်ဆက်စပ်သောအထွေထွေ pavlovian-instrumental transfer ကိုထုတ်လုပ်သည်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2007; 31: 766-774 [PubMed]
ကော့စတာ DS, Boakes RA ။ အားဖြည့်နှောင့်နှေးလာသောအခါတုံ့ပြန်၏ Maintenance ။ Behav ကိုလေ့လာပါ။ 2007; 35: 95-105 [PubMed]
Crombag HS, Shaham Y. ကြွက်များအတွင်း၌ကြာရှည်စွာမျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားပြီးနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေများအရမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းကိုပြန်လည်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Behav Neurosci ။ 2002; 116: 169-173 [PubMed]
Cunningham CL၊ Patel P၊ Milner L. Spatial တည်နေရာသည်အမြင်အာရုံဖြစ်သော်လည်းထိတွေ့နိုင်သောလှုံ့ဆော်မှုမဟုတ်သောနေရာများကိုအေးစက်စေရန်အတွက်အရေးပါသည်။ Behav Neurosci ။ 2006; 120: 1115-1132 [PubMed]
Dalley JW, Laane K ကို Theobald DE, အမ်းစထရောင်း HC, Corlett PR စနစ်, Chudasama Y ကို, Robbins TW ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် D1 နှင့် NMDA receptors ခြင်းဖြင့်အစာစားချင်စိတ် Pavlovian မှတ်ဉာဏ်၏အချိန်ကန့်သတ်ထားမော်ဂျူ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2005; 102: 6189-6194 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Davey GC, Cleland GG ။ ကြွက်များတွင် signal ကိုဗဟိုပြုအပြုအမူ၏မြေမျက်နှာသွင်ပြင်: ဆင်းရဲပြည်နယ်၏သက်ရောက်မှုများနှင့်အားဖြည့်အမျိုးအစား။ J ကို Exp စအို Behav ။ 1982; 38: 291-304 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Davey GC, Cleland GG, Oakley DA, Jacobs JL ။ ကြွက်များတွင် signal ကို - ညွှန်ကြားတုံ့ပြန်မှုမြေမျက်နှာသွင်ပြင်အပေါ်အစောပိုင်းနို့တိုက်ကျွေးရေးအတွေ့အကြုံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Physiol Behav ။ 1984; 32: 11-15 [PubMed]
Davey GC, Oakley: D, Cleland GG ။ ကြွက်များတွင် Autoshaping: တုံ့ပြန်မှု၏ပုံစံအပေါ်ချန်လှပ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ J ကို Exp စအို Behav ။ 1981; 36: 75-91 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
နေ့ JJ, Carelli RM ။ အဆိုပါနျူကလိယ accumbens နှင့် Pavlovian ဆုလာဘ်သင်ယူမှု။ အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်။ 2007; 13: 148-159 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
နေ့ JJ, ဝီ RA, Roitman MF, Carelli RM ။ တစ်ဦး autoshaping ပါရာဒိုင်းကနေသက်သေအထောက်အထား: နျူကလိယတွင် neuron Pavlovian ချဉ်းကပ်အပြုအမူတွေဝှက် accumbens ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2006; 23: 1341-1351 ။ [PubMed]
DeJong W. relapse တားဆီးရေး - ရေရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးမှုတိုးမြှင့်ရေးအတွက်ပေါ်ထွက်လာသည့်နည်းပညာ။ Int J ကိုစွဲ။ 1994; 29: 681-705 [PubMed]
Di Chiara G. အမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတွင် mesolimbic dopamine ၏အခန်းကဏ္ofကိုစိတ်ချစွာလေ့လာခြင်းဆိုင်ရာယူဆချက်။ J ကို Psychopharmacol ။ 1998; 12: 54-67 [PubMed]
di Ciano P ကို, Everitt BJ ။ Self- အုပ်ချုပ်သောကိုကင်း, ဘိန်းဖြူသို့မဟုတ် sucrose နှင့်အတူတွဲလှုံ့ဆော်မှု၏အေးစက်အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများ: စွဲအပြုအမူ၏ဇွဲများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Neuropharmacology ။ 2004; 47 ပေးသွင်းသူ 1: 202-213 ။ [PubMed]
Dickinson တစ်ဦးက, စမစ်ဂျေ, dopamine ရန်အောက်တွင်သင်ယူခြင်း Pavlovian နှင့်ဆာပမက်လုံးပေး၏ Mirenowicz ဂျေ Dissociation ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2000; 114: 468-483 ။ [PubMed]
Domjan M က, O'Vary D ကို, အစာစားချင်စိတ်များနှင့်အထီးဂျပန်ငုံးအတွက်သူတွေရဲ့စားသောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဂရင်း P. ကိုက်။ J ကို Exp စအိုပြုမူနေ။ 1988; 50: 505-519 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Engberg LA၊ Hansen G၊ Welker RL၊ သောမတ်စ်ဒေါက်တာ။ ကြိုတင်အတွေ့အကြုံ၏လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအဖြစ် autoshaping မှတဆင့် key-pecking ၏ဝယ်ယူ: "သင်ယူပျင်းရိ"? သိပ္ပံ။ 1972; 178: 1002-1004 [PubMed]
Everitt BJ, Robbins TW ။ ကြွက်နှင့်မျောက်များတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန်ဒုတိယအကြိမ်အစီအစဉ်များ - အားဖြည့်စွမ်းရည်ကိုတိုင်းတာခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေသည့်အပြုအမူ။ Psychopharmacology (Berl) 2000; 153: 17-30 [PubMed]
Everitt BJ, Robbins TW ။ မူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက်အားဖြည့်များ၏အာရုံကြောစနစ်များ: လုပ်ရပ်များကနေအလေ့အထမှမလှူရန်။ နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 1481-1489 ။ [PubMed]
Farwell BJ, Ayres JJB ။ ကြွက်များတွင်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောအားဖြည့်ခြင်းနှင့်တုန့်ပြန်မှုအားဖြည့်ဆက်ဆံမှုများကကြွက်များအတွင်းရှိအေးဆေးတည်ငြိမ်သောခေါင်းကိုက်ခြင်း (“ ရည်မှန်းချက်ခြေရာခံခြင်း”) ကိုထိန်းချုပ်သည်။ သင်ယူခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှု။ 1979; 10: 295-312
Flagel SB, Watson SJ, Akil H, Robinson TE ။ တစ် ဦး ဆုလာဘ် -related cue မှမက်လုံးပေး salience ၏ attribute အတွက်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှု: ကိုကင်း sensitization အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ Behav ဦး နှောက် Res ။ 2008; 186: 48-56 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
"အခြေအနေ" တွင်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုတစ်ခု၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်: စိတ်ပညာနှင့်ဆက်စပ်မှု Flagel SB, Watson SJ, Robinson TE, Akil H. Neuropsychopharmacology ။ 2006; 31: S262-S263
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ချဉ်းကပ်ရန်လိုလားခြင်းအတွက်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုကြွက်များ၏ dopamine စနစ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်မြှင့်တင်ရန်အလံ SB, Watson က SJ, ရော်ဘင်ဆင် TE, Akil အိပ်ချ်။ Psychopharmacology (Berl) 2007; 191: 599-607 [PubMed]
Gamzu အီးဝီလျံ DR ။ ရှုပ်ထွေးသောအရိုးတုံ့ပြန်မှု၏ဂန္ထဝင်အေးစက်။ သိပ္ပံ။ 1971; 171: 923-925 [PubMed]
Hearst E, Jenkins အိပ်ချ် - ခြေရာခံ - လှုံ့ဆော်မှု - အားဖြည့်စပ်လျဉ်းခြင်းနှင့်ညွှန်ကြားထားအရေးယူ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ Monograph; Austin: 1974 ။
Holland ကွန်ပျူတာ။ Pavlovian အေးစက်သည့်တုန့်ပြန်မှုပုံစံ၏အဆုံးအဖြတ်ပေးသောအရာအဖြစ် Conditioned stimulus ။ J ကို Exp Psychol Anim Behav လုပ်ငန်းစဉ်။ 1977; 3: 77-104 [PubMed]
Holland ကွန်ပျူတာ။ Pavlovian appetitive conditioners response ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အနေဖြင့် CS-US ကြားကာလ။ J ကို Exp Psychol Anim Behav လုပ်ငန်းစဉ်။ 1980a; 6: 155 –174 [PubMed]
Holland ကွန်ပျူတာ။ Pavlovian appetitive ပုံစံအပေါ်အမြင်အာရုံဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုလက္ခဏာများသြဇာလွှမ်းမိုးမှုသည်ကြွက်များတွင်တုန့်ပြန်မှုအခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ J ကို Exp Psychol Anim Behav လုပ်ငန်းစဉ်။ 1980b; 6: 81-97 [PubMed]
Holland ကွန်ပျူတာ။ Pavlovian အေးစက်အတွက်အခါသမယ setting ။ In: အယ်ဒီတာ Medin DL ။ သင်ယူခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှု၏စိတ်ပညာ။ ပညာရေးဆိုင်ရာသတင်းစာ၊ San Diego မှ: 1992 ။ စစ။ 69-125 ။
Jenkins HM, Moore က BR ။ အစားအစာသို့မဟုတ်ရေအားဖြည့်နှင့်အတူအလိုအလျောက် -shaped တုံ့ပြန်မှု၏ပုံစံ။ J ကို Exp စအို Behav ။ 1973; 20: 163-181 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kearns DN, Gomez-Serrano MA, Weiss SJ, Riley AL ။ Lewis နှင့် Fischer ကြွက်များ၏ autoshaping (နိမိတ်လက္ခဏာ - ခြေရာခံခြင်း), ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုပြောင်းပြန်သင်ယူမှုနှင့်အပျက်သဘောအလိုအလျောက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပေါ်တစ် ဦး နှိုင်းယှဉ်။ Behav ဦး နှောက် Res ။ 2006; 169: 193-200 [PubMed]
Kearns DN, Weiss SJ ကြွက်များတွင်နိမိတ်လက္ခဏာ - ခြေရာခံခြင်း (autoshaping): ကိုကင်းနှင့်အစားအစာကိုခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်နှိုင်းယှဉ်။ Behav ကိုလေ့လာပါ။ 2004; 32: 463-476 [PubMed]
Kemenes, G, ဗင်ယာမိန် PR စနစ်။ ရေကန်တွင်းရှိရည်မှန်းချက်ခြေရာခံသည့်အပြုအမူ Lymnaea stagnalis အာရုံကြော Biol Behav ။ 1989; 52: 260-270 [PubMed]
Killeen PR ။ တစ် ဦး ပျက်ကွက်အရေးပေါ်နှင့်အတူနိမိတ်လက္ခဏာကိုခြေရာခံအတွက်ရှုပ်ထွေးသောပြောင်းလဲနေသောဖြစ်စဉ်များ (အနုတ်လက္ခဏာ automaintenance) J Exp Psychol Animation Behav လုပ်ငန်းစဉ်။ 2003; 29: 49-61 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Koksal F, Domjan M, Kurt A, Sertel O, Orung S, Bowers R, Kumru G. မျိုးပွားမှု၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်။ Behav Res Ther ။ 2004; 42: 1421-1434 [PubMed]
Krank MD ။ Pavlovian အီသနောနှင့်အတူအေးစက်: နိမိတ်လက္ခဏာ - ခြေရာခံခြင်း (autoshaping), အေးစက်မက်လုံးပေးနှင့်အီသနောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး။ အရက် Clin Exp Res ။ 2003; 27: 1592-1598 [PubMed]
Krank MD၊ O'Neill S၊ Squarey K၊ Jacob J. Goal နှင့်ကြွက်များတွင်မချိုမြိန်သောအရက်ဖြင့်တည်မြဲသောအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ချဉ်းကပ်ခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်းနှင့်စားသုံးခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။ Psychopharmacology (Berl) 2008; 196: 397-405 [PubMed]
Kruzich PJ, Congleton KM, RE ကိုကြည့်ပါ။ ဂန္ထဝင်သွေးကြောသွင်းကင်းနှင့်အတူအေးစက်နေတဲ့ discrete ဒြပ်ပေါင်းများလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါး - ရှာဖွေအပြုအမူ၏အေးစက်ပြန်လည်ထည့်သွင်း။ Behav Neurosci ။ 2001; 115: 1086-1092 [PubMed]
Lajoie J, Bindra alone တစ် ဦး တည်းလှုံ့ဆော်မှု - မက်လုံးပေးအရေးပေါ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ autoshaping နှင့်ဆက်စပ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအနက်။ စိတ်ပညာ၏ကနေဒါဂျာနယ်။ 1976; 30: 157-173
Locurto C, Terrace HS, Gibbon J. Autoshaping, ကျပန်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်ကြွက်များတွင်ပျက်ကွက်ခြင်းလေ့ကျင့်ခြင်း။ J ကို Exp စအို Behav ။ 1976; 26: 451-462 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Locurto CM ။ conditional Bhavior ကိုပိုင်းခြားရန် autoshaping ၏ပံ့ပိုးမှုများ။ In: Locurto CM၊ Terrace HS, Gibbon J၊ အယ်ဒီတာများ။ Autoshaping နှင့်အေးစက်သီအိုရီ။ ပညာရေးဆိုင်ရာသတင်းစာ၊ နယူးယောက်: 1981 စစ။ 101-135 ။
Lovibond PF ။ တစ်ဦး Pavlovian စာစားချင်စိတ်ကိုအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ဆာပအပြုအမူ၏နည်းပြ။ J ကို Exp Psychol Animation ပြုမူနေ Process ကို။ 1983; 9: 225-247 ။ [PubMed]
McAlonan GM၊ Robbins TW, Everitt BJ ။ တစ် ဦး အေးစက်ရာအရပျ preference ကို၏ဝယ်ယူအပေါ် medial dorsal thalamic နှင့် ventral pallidal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - ဆုလာဘ် -related ဖြစ်စဉ်များအတွက် ventral striatopallidal စနစ်၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအတွက်နောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထား။ အာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1993; 52: 605-620 [PubMed]
Moore BR ။ ခိုအတွက်ရိုးရှင်းသောတူရိယာသင်ယူမှုအတွက်ညွှန်ကြားထား Pavlovian တုံ့ပြန်မှု၏အခန်းကဏ္.ကို။ In: Hinde RA၊ Stevenson-Hinde J၊ အယ်ဒီတာများ။ သင်ယူခြင်းအပေါ်ကန့်သတ်ချက်များ။ ပညာရေးဆိုင်ရာသတင်းစာ၊ လန်ဒန်: 1973 ။
Myerson J, Myerson WA, Parker BK ။ လှုံ့ဆော်မှု - ပြောင်းလဲမှုအားဖြည့်ခြင်းမရှိဘဲအလိုအလျောက်ထိန်းသိမ်းခြင်း - အဓိကအပေါက်လေးများကိုယာယီထိန်းချုပ်ခြင်း။ J ကို Exp စအို Behav ။ 1979; 31: 395-403 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Newlin DB ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအေးစက်နှင့်အရက်နှင့်ကိုကင်းများအတွက်တဏှာတစ် ဦး နှိုင်းယှဉ်။ လတ်တလော Dev Alcohol ။ 1992; 10: 147-164 [PubMed]
Newlin DB ။ ကိုယ်တိုင် - ရိပ်မိအသက်ရှင်နိုင်စွမ်းနှင့်မျိုးပွားကြံ့ခိုင်ရေး (SPFit) ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်၏သီအိုရီ။ စွဲ။ 2002; 97: 427-445 [PubMed]
Nilsson J, Kristiansen TS, Fosseidengen JE, Ferno A, van den Bos R. Sign- နှင့်အတ္တလန္တိတ်ကော့ဒ် (Gadus morhua) Anim Cogn တွင်ရည်မှန်းချက်ခြေရာခံခြင်း။ စာနယ်ဇင်းများတွင် 2008 ။ [PubMed]
O'Flaherty WD ။ အဆိုပါတူးစင် Veda: တစ်ခုမနုologyဗေဒ။ ပင်ဂွင်းစာအုပ်များ; နယူးယောက်: 1981 လောင်းကစားသမားတွေညည်းတွားငိုကြွေးကြတယ်။
Pavlov ဗြဲအခြေအနေပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု: ဦး နှောက် Cortex ၏ဇီဝကမ္မလှုပ်ရှားမှုအားစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း။ အောက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်၊ လန်ဒန်: 1927 ။
Pavlov I. စိတ်ပညာရှင်တစ် ဦး ဇီဝကမ္မဗေဒ၏တုံ့ပြန်မှု။ Psychol ဗျာ 1932; 39: 91-127
Peterson GB ကို။ ကြွက်များတွင်အစားအစာနှင့် ဦး နှောက် - လှုံ့ဆော်အားဖြည့်၏တုံ့ပြန်မှုရွေးချယ်ရေးဂုဏ်သတ္တိများ။ Physiol Behav ။ 1975; 14: 681-688 [PubMed]
Peterson GB ကို, Ackil je, Frommer မိသားစုဆရာဝန်, Hearst ES ။ အစားအစာသို့မဟုတ် ဦး နှောက် - လှုံ့ဆော်အားဖြည့်များအတွက်အချက်ပြမှုများဆီသို့အခြေအနေချဉ်းကပ်မှုနှင့်အဆက်အသွယ်အပြုအမူ။ သိပ္ပံ 1972; 177: 1009-1011 [PubMed]
Phillips က AG, မက်ဒေါ်နယ် AC, Wilkie DM ။ neuroleptic မူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် ဦး နှောက် - လှုံ့ဆော်မှုဆုလာဘ်၏ signal ကိုတုံ့ပြန် autoshaped ၏နှောင့်အယှက်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး Behav ။ 1981; 14: 543-548 [PubMed]
Purdy je, Roberts သည် AC, Garcia က CA. cuttlefish (Sepia officinalis) J Comp Psychol တွင်ခြေရာခံခြင်း။ 1999; 113: 443-449 [PubMed]
Rescorla RA ။ Pavlovian အေးစက်။ ဒါဟာသင်ထင်သည်မဟုတ်။ Am Psychol ။ 1988; 43: 151-160 [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး - sensitization သီအိုရီ။ ဦး နှောက် Res ဗျာ 1993; 18: 247-291 ။ [PubMed]
Sanabria F, Sitomer MT, Killeen PR ။ အနုတ်လက္ခဏာ automaintenance ပျက်ကွက်လေ့ကျင့်ရေးထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ J ကို Exp စအို Behav ။ 2006; 86: 1-10 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Schindler CW, Panlilio LV, Goldberg SR ။ တိရိစ္ဆာန်များအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုဒုတိယအကြိမ်အစီအစဉ်များ။ Psychopharmacology (Berl) 2002; 163: 327-344 [PubMed]
Schmajuk NA, ဟော်လန် PC ကို။ အခါသမယ setting ကို: တိရိစ္ဆာန်များအတွက် Associative သင်ယူနှင့်သိမှတ်ခံစားမှု။ အမေရိကန်စိတ်ပညာအသင်း၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: 1998 ။
Schwam E, Gamzu E. ရှဥ့်မွေးမျောက်ထဲမှာ autoshaping လုပ်ခြင်းအပေါ်ကန့်သတ်ချက် - Stimulus နဲ့တုန့်ပြန်မှုအချက်များ။ Bull Psychonom Soc ။ 1975; 5: 369-372
ဆေးလ်ဗား FJ, ဆေးလ်ဗား KM, သစ်တော် JJ ။ ရည်မှန်းချက် - ခြေရာခံ - နှိုင်းယှဉ်ပြခြင်း - အေးစက် - လှုံ့ဆော်မှု -to- ခြွင်းချက်မရှိ - နှိုးဆွအကွာအဝေး၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို Exp စအို Behav ။ 1992; 57: 17-31 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Skinner BF ။ သက်ရှိများ၏အပြုအမူ။ Appleton-Century-Crofts; နယူးယောက်: 1938
Staddon JER, Simmelhag VL ။ အဆိုပါ "အယူသီး" စမ်းသပ်မှု: သပ္ပါယ်အပြုအမူ၏အခြေခံမူ၎င်း၏သက်ရောက်မှုတစ်ခုပြန်လည်သုံးသပ်။ Psychol ဗျာ 1971; 78: 3-43
Stad JD၊ Clinton S၊ Neal C, Schneider J, Jama A၊ Miller S, Vazquez DM, Watson SJ, Akil H. ရွေးချယ်မှုများ - အသစ်အဆန်းရှာဖွေသည့်စရိုက်များတွင်မတူကွဲပြားမှုအတွက်မျိုးဆက်ပွားခြင်း။ Behav မျိုးရိုးဗီဇ။ 2006; 36: 697-712 [PubMed]
Stewart က J ကို, က de ကျေး H ကို, opiates နှင့်စိတ်ကြွဆေး၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ခြွင်းချက်မရှိနှင့်အခြေအနေများကိုမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ၏ Eikelboom R. အခန်းက္ပ။ Psychol ဗျာ 1984; 91: 251-268 ။ [PubMed]
Stiers M, Silberberg A. ကြွက်များတွင်လီဗာအဆက်အသွယ်တုံ့ပြန်မှုများ - အပျက်သဘောဆောင်သောတုန့်ပြန်မှုအားဖြည့်မှီခိုမှုနှင့်အတူအလိုအလျောက်ပြုပြင်ခြင်း။ J ကို Exp စအို Behav ။ 1974; 22: 497-506 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Timberlake W က Grant DL ။ အစားအစာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အခြားကြွက်တစ်ကောင်၏တင်ပြမှုကိုကြွက်များတွင်အလိုအလျောက်ပုံဖော်ခြင်း။ သိပ္ပံ 1975; 190: 690-692
Timberlake W, လူးကပ်စ GA ။ အယူသီးသောအပြုအမူ၏အခြေခံ - အခွင့်အလမ်းပေါ်ပေါက်လာခြင်း၊ J ကို Exp စအို Behav ။ 1985; 44: 279-299 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Toates အက်ဖ်လှုံ့ဆျောမှုစနစ်များ။ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; ကင်းဘရစ်, ဗြိတိန်: 1986 ။
Toates အက်ဖ်အပြုအမူ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက်သိမြင်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှု - တုံ့ပြန်မှုဖြစ်စဉ်များ၏အပြန်အလှန်။ Neurosci Biobehav ဗျာ 1998; 22: 59-83 [PubMed]
Tomie အေသည်တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း (CAM) မှဆုလာဘ်များကိုရှာဖွေခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Neurosci Biobehav ဗျာ 1996; 20: 505-535 [PubMed]
Tomie အေ Autoshaping နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ။ In: Mowrer RR၊ Klein SB၊ အယ်ဒီတာများ။ ခေတ်ပြိုင်သင်ယူမှုသီအိုရီ၏လက်စွဲစာအုပ်။ Erlbaum; Hillsdale, NJ: 2001 စစ။ 409-439 ။
Tomie A, Aguado AS, Pohorecky LA, Benjamin D. Ethanol သည်နှောင့်နှေးခြင်းကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုကိုနှောင့်နှေးခြင်းကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ impulsivity သည် autoshaping ကိုခန့်မှန်းသည်။ Psychopharmacology (Berl) 1998; 139: 376-382 [PubMed]
Tomie A, Aguado AS, Pohorecky LA, Benjamin D. ကြွက်များတွင်ဖိအားကိုဖြစ်ပေါ်စေသော pavlovian autoshaping တွင်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုများကစိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော corticosterone ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် monoamines ပမာဏ mesolimbic level ကိုခန့်မှန်းသည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး Behav ။ 2000; 65: 509-517 [PubMed]
Tomie A၊ Brooks W, Zito B. Sign-tracking: ဆုအတွက်ရှာဖွေခြင်း။ In: Klein S၊ Mowrer R၊ အယ်ဒီတာများ။ ခေတ်ပြိုင်သင်ယူမှုသီအိုရီများ - Pavlovian Conditioning နှင့်ရိုးရာသင်ယူမှုသီအိုရီ၏အခြေအနေ။ လောရင့် Erlbaum Associates; Hillsdale, NJ: 1989 စစ။ 191-223 ။
Tomie A၊ Festa ED၊ Sparta DR၊ Pohorecky LA ။ လီဗာ saccharin- အီသနောခြွင်းချက်မရှိနှိုးဆွဖြေရှင်းချက်အားဖြင့်သွေးဆောင်လှုံ့ဆော်မှု - ညွှန်ကြား autoshaping: အီသနောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်စမ်းသပ်မှုအကွာ၏သက်ရောက်မှု။ အရက်။ 2003; 30: 35-44 [PubMed]
Tomie တစ် ဦး က, အညစျအကွေး KL, Pohorecky LA က။ Pavlovian နိမိတ်လက္ခဏာ - ခြေရာခံခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဖြင့်မျှဝေသည့်အပြုအမူဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့် neurobiological အလွှာများ။ စာနယ်ဇင်းများတွင် ဦး နှောက် Res ဗျာ 2007 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Tomie A၊ Tirado အေဒီ၊ Yu L၊ Pohorecky LA ။ Pavlovian autoshaping လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည်ပလာစမာ corticosterone နှင့်ကြွက်များတွင် prefrontal cortex ရှိ norepinephrine နှင့် serotonin ပမာဏတို့ကိုတိုးပွားစေသည်။ Behav ဦး နှောက် Res ။ 2004; 153: 97-105 [PubMed]
Uslaner JM, Acerbo MJ, Jones SA, Robinson TE ။ ကိုကင်း၏သွေးကြောသွင်းဆေးထိုးအချက်ပြတဲ့လှုံ့ဆော်မှုမှမက်လုံးပေး salience ၏သတ်မှတ်ချက်။ Behav ဦး နှောက် Res ။ 2006; 169: 320-324 [PubMed]
Uslaner JM၊ Dell'orco JM၊ Pevzner A၊ Robinson TE ။ အစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်များနှင့်တွဲဖက်သည့်လှုံ့ဆော်မှုများသို့နိမိတ်လက္ခဏာကိုခြေရာခံသည့် subthalamic နျူကလိယကိုတွေ့ရှိခြင်း၏လွှမ်းမိုးမှု - မက်လုံးမက်မက်မက်မောမှုပေးမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်း။ Neuropsychopharmacology ။ စာနယ်ဇင်းများတွင် 2007 ။ [PubMed]
Wasserman EA ။ Pavlovian ၏အပူအားဖြည့်ခြင်းဖြင့်အေးစက်စေခြင်းကကြက်များတွင်လှုံ့ဆော်မှုနှင့် ဦး နှောက်အမြှေးပါးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သိပ္ပံ 1973; 181: 875-877 [PubMed]
Wessels MG ။ autoshaping စမ်းသပ်မှုတွင်ခို၏ preckcking အပြုအမူအပေါ်သို့အားဖြည့်များ၏သက်ရောက်မှု။ အပြုအမူ၏စမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ဂျာနယ်။ 1974; 21: 125-144 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
White NM ။ အားဖြည့်ဆေးများအဖြစ်စွဲစွဲစေသောမူးယစ်ဆေးဝါးများ။ စွဲ။ 1996; 91: 921-949 ဆွေးနွေးမှု 951-965 ။ [PubMed]
Wilkie DM, မက်ဒေါ်နယ် AC အ။ အမေရိကန်ကဲ့သို့ ဦး နှောက်ကိုလျှပ်စစ်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူကြွက်များတွင် Autoshaping ။ Physiol Behav ။ 1978; 21: 325-328 [PubMed]
Williams က BA, အေးစက်အားဖြည့်များအတွက် Dunn R. preference ကို။ J ကို Exp စအို Behav ။ 1991; 55: 37-46 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဝီလျံဒီ၊ ဝီလျံအိပ်ချ်။ ခိုမှအလိုအလျောက်ထိန်းသိမ်းခြင်း။ J ကို Exp စအို Behav ။ 1969; 12: 511-520 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Zamble E၊ Hadad GM၊ Mitchell JB, Cutmore TR ။ လိင်မှုနှိုးဆွမှု၏ Pavlovian အေးစက်: ပထမနှင့်ဒုတိယအဆင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ J ကို Exp Psychol Anim Behav လုပ်ငန်းစဉ်။ 1985; 11: 598-610 [PubMed]
Zener K. အဆိုပါအေးစက်တုံ့ပြန်မှု၏သီအိုရီအဘို့အအေးစက်တံထွေးလျှို့ဝှက်ချက်နဲ့အပြုအမူ၏အရေးပါမှုကို။ နံနက် J ကို Psychol ။ 1937: 384-403 ။